Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/21 Janoary 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/21 Janoary 2013
taotrano (nitranga in-1) : «Sakamalao sy havozo isika ka samy manana ny hanitra ho azy, ny taotrano hono tsy ho efan'ny irery, ny hahamarin-toerana ny tsirairay amin'ny fifidianana no tena zava-dehibe, koa andao re hifanome tanana», hoy ity farany nandritra ny lahateny nataony ho fanokafana ny kaongresy nasionalin'ny antoko tarihiny, tetsy amin'ny «Hotel Carlton» Anosy, ny sabotsy teo. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
nitana (nitranga in-1) : Asa sosialy
Efa nitana ny toeran'ny filohan'ny fitsarana momba ny zaza tsy ampy taona no sady mpitsara mpamoaka didy ary mpitsara mpanao famotorana teto Antananarivo ny filohan'ny Cenit. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
handatsabato (nitranga in-1) : Herinandro vitsy monja dia handeha handatsabato isika. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Saribe (nitranga in-1) : Saribe ho an'ny #BallotRevolution: Nakarin'ilay mpampiasa Twitter @bonifacemwangi
Manazava ny bilaogy Njathika : Tamin'ny herinandro lasa dia nandany tamin'ny fomba miafina fifanarahana iray mahabe resaka, mitentina 9. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Ramilijohn (nitranga in-1) : Hita ihany avy eo ireo ankizy, izay milaza avokoa fa nitsoaka ny tokantranon-dray aman-dreniny, ka nonina tany amin'ny sakaizany », hoy ny fanamafisan'ny kaomisera Ramilijohn Hanitra, eo anivon'ny Pmpm eny Anosy. (Fiainam-pianakaviana – Miha kely taona ny zazavavy very manaraka lehilahy)
Randrianantoandro (nitranga in-1) : Haja Randrianantoandro. (Tanjombato – Trano telo fitahirizan-damban’ny orinasa iray kilan’ny afo)
Minoa (nitranga in-1) : Minoa fotsiny ihany…. (Maka maro)
tatitry (nitranga in-1) : Naratra novelesin'izy ireo tamin'ny vodibasy teo amin'ny lohany ilay lehilahy », hoy ny tatitry ny zandary. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
tarihiny (nitranga in-1) : «Sakamalao sy havozo isika ka samy manana ny hanitra ho azy, ny taotrano hono tsy ho efan'ny irery, ny hahamarin-toerana ny tsirairay amin'ny fifidianana no tena zava-dehibe, koa andao re hifanome tanana», hoy ity farany nandritra ny lahateny nataony ho fanokafana ny kaongresy nasionalin'ny antoko tarihiny, tetsy amin'ny «Hotel Carlton» Anosy, ny sabotsy teo. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
fahamendrehany (nitranga in-1) : Fantatsika tsara mihitsy fa ny ankamaroan'ny Keniana dia tsy mifidy ireo mpitondra noho ny fahamendrehany. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Raveloarisoa (nitranga in-1) : Maina be toy ireny efa hitantsika ireny dia avy eo mivatravatra be ny orana », hoy Raveloarisoa Sahondrarilala, talen'ny fitrandrahana mikasika ny toetr'andro. (Toetr’andro – Miova ny toetry ny rotsak’orana eto amintsika)
nahafantarana (nitranga in-3) : Tsilian-tsofina anefa no nahafantarana fa isan'ireo mety hirotsaka amin'ny anarany manokana hiatrika an'io fifidianana io i Botozaza Pierrot. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
mangan' (nitranga in-1) : Lalao tsy dia nampoizin'ny rehetra loatra satria na dia vao sambany tamin'ity taona ity aza ireto Antsantsa mangan'i Cap Vert ireto vao tafita amin'ny dingan'ny famaranana dia azo heverina fa nahita fahombiazana teo amin'ny lalao voalohany nataon'izy ireo. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
fifampitifirana (nitranga in-2) : tsy dia mandry fahalemana loatra ny any Sakaraha
Tsy raikitra omaly indray ny fanolorana omby, karazana onitra ho an'ny havan'ireo olona fito namoy ny ainy nandritra ny fifampitifirana tany Sakaraha, andro vitsy lasa izay. (Fitifirana tany Sakaraha – Ahiana hihetsika indray ny havan’ ireo olona fito maty)
sofy (nitranga in-1) : Mpanakanto avy amin'ny Nosy mirahavavy roa izay nahitana an'i Diho sy Maalesh no niaka-tsehatra, ka nitondra ainga vaovao teo amin'ny sofin'ireo mpankafy mozika malagasy. (IFM Analakely – Nanakoako ny mozika nentin-drazana mahorey sy kaomôrianina)
Andriatahiana (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
fahatokisan' (nitranga in-1) : Tokony hisy ezaka manokana atao hamerenana ny fahatokisan'ny banky manoloana ireo fifanakalozam-bola atao. (Tsara hay)
mpony (nitranga in-2) : Taorian'i Nosy-Be sy Antalaha dia ireo mponin'i Vohilava ao Sainte-Marie indray no milaza ny hanao karazana fitokonana eo anoloan'ny biraon'ny Jirama ao Barachois anio manomboka amin'ny 10 ora maraina. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
Nalefa (nitranga in-1) : « Nalefa notsaboina avy hatrany teny amin' ny hôpitaly Joseph Ravo-ahangy Andrianavalona ireo olona naratra ireo. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
vàka (nitranga in-1) : Nanao ity antso famoriana ity tao amin'ny Twitter i @KenyaNiKwetu :
tongava manatevina ny #KenyaNiKwetu ao amin'ny Zoron'ny Fahalalahana ao an-Kianja Uhuru amin'ny 10 maraina ary ‘ndeha hanao izay hisian'ny Revolisionam-Pifidianana #StateFuneral #BurytheVulture @KanjiMbugua nibitsika hoe : Mbola vàka mikasika ny fanomezana tsy madio ho an'ireo Solombavam-bahoaka tapitra fe-potoam-piasàna. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
hirosoana (nitranga in-1) : Mia-loha izay fiatrehana ny fifidianana izay anefa dia nandroso hevitra ny amin' ny tokony hirosoana amin'ny fametrahana ireo fepetra rehetra izay hiantoka ny fitoniana eto Madagasikara ity antoko ity. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
Nilaozan' (nitranga in-1) : « Nilaozan'ny hisatra ilay fiara tamin'ny fidirany tao anaty fiolahana ka nivadibadika ary izany no nandratra ireo olona enina ireo », hoy ny tatitra avy amin' ny zandarimaria any an-toerana. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
Mafibe (nitranga in-1) : Ny vola azo tamin'ny fandraisana anjara tamin'io fifaninanana nomena anarana hoe « Mafibe » io no nividianana ny ondry sy ny fanamiana fitondra milalao, izay omena ny mpandresy sy ny resy. (Sombiny)
hampiarahana (nitranga in-1) : Eo ihany koa anefa ny hen'omby sy ravintoto hampiarahana amin'ny voanio. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
hevitry (nitranga in-1) : Etsy ankilan'izay dia nilaza ny haka ny hevitry ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka mahakasika ny fisafidianana kandidà hiatrika io fifidianana io ireo mpikatroka Arema miara-dia amin'i Vaovao Benjamin. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
DREAM (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
rotsak' (nitranga in-2) : « Miova ny toetry ny rotsak'orana amin'izao fotoana. (Toetr’andro – Miova ny toetry ny rotsak’orana eto amintsika)
ASSM (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
hifampiarahabana (nitranga in-1) : Fotoana efa voaomana mialoha natokan'ity fiangonana ity hitondrana am-bavaka sy hifampiarahabana amin'ny filohan'ny Fjkm sy ny asa rehetra eo anivon'izany fiangonana izany io notanterahina io. (Tapatapany)
tafahoatra (nitranga in-1) : Aza hadinoina, fa mba olona nahavita azy ihany koa Ravalomanana Marc tamin'ny fotoan'andro, saingy ny fisisihana sy ny fankamamiana diso tafahoatra ilay seza fiandrianana no nampangarika ny mason-bahoaka taminy. (Izay voa aza tezitra!)
zon' (nitranga in-2) : nanao jery todika ireo mpiantsehatra maro mivondrona ao anatin'ny fivondronana nasionalin'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona (UNMDH) ny faran'ny herinandro teo. (Zon’olombelona – Niroborobo ny herisetra an-tokantrano sy ny ady tany)
Manjakaray (nitranga in-3) : Nandohalika teo anatrehan'ny TFM Ankasina amin'ny alalan'ny isa 23 no ho 20 ny FT Manjakaray. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
malalaky (nitranga in-1) : na dia tsy nahafeno hipoka ny efitrano malalaky ny CCI Ivato aza, dia mbola nambabo ny fon'ny mpijery ny Malok”ila 13 Mey,naseho voalohany omaly tamin'ny efitrano maherin'ny 80 manerana ny Nosy. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
dolara (nitranga in-1) : Tambazan'ny federasiona etiopianina ho an'ny baolina kitra 100 000 dolara isan'olona ny Antilopes Walya raha mahazo ny amboaran'i Afrika, izay hatao atsy Afrika Atsimo. (Anjoron- »CAN »)
fampahatsiarovana (nitranga in-1) : Ho fampahatsiarovana ireo mpitarika ihany koa ilay hetsi-panoherana fa hoe vonona ny hanao revolisiona am-pilaminana amin'ny alàlan'ny fifidianana ny Keniana. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
nandavoan' (nitranga in-1) : isa 15 no ho 13 no nandavoan'Ankadifotsy ny ekipan'ny Lagara
Tsy isan'ireo ekipa efatra hiatrika ny manasa-dalana eo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Filoha, ny UAS Cheminot, izay tompondakan'i Madagasikara farany. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
nokarakaraina (nitranga in-1) : « Nody avy hatrany izy ireo ny tolakandro rehefa notsaboina sy nokarakaraina », raha ny fanampim-panazavany ihany. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
hihena (nitranga in-1) : Raha tsy izany dia hihena 10% indray ny vola hiditra amin'ny fanjakana amin'ity taona ity. (Tsara hay)
nivantambantana (nitranga in-1) : Efa tsy misy intsony rahateo ny rohy mampifamatopatotra ka dia nahitsihitsy sy nivantambantana ny fomba fite- nenana. (Izay voa aza tezitra!)
Didier (nitranga in-1) : Etsy ankilan'izay dia nilaza ny haka ny hevitry ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka mahakasika ny fisafidianana kandidà hiatrika io fifidianana io ireo mpikatroka Arema miara-dia amin'i Vaovao Benjamin. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
novonoy (nitranga in-1) : lehilahy mpamboly iray no naratra novonoin'ny jiolahy efatra nirongo basy sy fitaovana famakiana trano, ny alin'ny zoma 18 janoary teo tokony ho tamin'ny 11 ora sy sasany alina, tany Analavory. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
Christin (nitranga in-1) : Toy izany ihany koa i Jean Christin Razafimanana (filohan'ny ligin'Atsinanana), Boto Marcel (filohan'Ihorombe) ary Jean de Capistran Rakotovaoarilala (filohan'i Matsiatra ambony). (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Claude (nitranga in-1) : Vao tamin'ny sabotsy teo anefa no niverina nanao fanazarantena ity farany, taorian'ny saika nametrahan'i Claude le Roy, mpanazatrany, fialana. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Tambazan' (nitranga in-1) : Tambazan'ny federasiona etiopianina ho an'ny baolina kitra 100 000 dolara isan'olona ny Antilopes Walya raha mahazo ny amboaran'i Afrika, izay hatao atsy Afrika Atsimo. (Anjoron- »CAN »)
Unmdh (nitranga in-1) : Hita izany teo amin'ny vehivavy, ny ankizy, ny olona manana fahasembanana, ny mpitandro filaminana, … saingy efa nisy ihany ny paikady », hoy Rafolisisoa Hanitriniala, filoha nasionalin'ny Unmdh. (Zon’olombelona – Niroborobo ny herisetra an-tokantrano sy ny ady tany)
Mbalo (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Collins (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
fadiana (nitranga in-1) : Raha latsak'ireo andro ireo na mahery dia tokony hizaha mpitsabo », raha ny torohevitra hatrany, ary fadiana ny fihinanana fanafody ahitana singana « aspirine ». (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
volantsika (nitranga in-1) : “Hihena hatrany amin'ny 16% ny sandan'ny volantsika. (Tsara hay)
Nopitsohan' (nitranga in-1) : « Nopitsohan'ireo olon-dratsy tamin'ny « barre à mine » ny tranon'ilay mpamboly, ka rehefa tafiditra tao an-trano izy ireo dia niditra tao amin'ny efitra nisy an'ilay lehilahy ary nanambana ity farany tamin'ny basy nentin'izy ireo. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
fampihenana (nitranga in-2) : ny fahitan'ireo mpahay hary ny toekarena amin'ity taona 2013 ity
Araka ny vinavinan'ireo mpahay hary mivondrona ao anatin'ny Crem (Centre de réflexion des économistes à Madagascar) dia ny fampihenana ny fandanian' ny governemanta no antoky ny ho fahasalaman'ny toekarena eto Madagasikara amin'ity taona 2013 ity. (Tsara hay)
dian (nitranga in-1) : Ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta dian nandany ihany koa ny hahazoan'ny tsirairay amin'izy ireo mpiambina manokana mitam-piadiana, pasipaoro diplaomatika ho an'ireo misotro ronono sy ny vadiny ary fahafahana miditra tsy misy fetra amin'ny toerana fandraisana olona ambony- na Very Important Person (VIP) any amin'ireo seranam-piaramanidina rehetra ao anatin'i Kenya. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
hitrangan' (nitranga in-1) : « Amin'ny andro voalohany na faharoa ahatongavan'ny fadim-bolana no mety hitrangan'ny fanaintainana, saingy raha mitohy aorian'izay io marary io dia tokony hanatona mpitsabo. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
faritry (nitranga in-1) : Nisy fotoana izy io niarahana tamin'ireo miaramila frantsay mitoby aty amin'ny faritry ny Ranomasimbe indianina », hoy ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny Tafika malagasy. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
Vavimatoan' (nitranga in-1) : Vavimatoan'ny fianakaviana rahateo ny tenany izay isan'ireo akaiky ny rainy indrindra amin'ireo iray tampo aminy. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Nandevina (nitranga in-1) : me/ptBPN-6X avy amin'i @Tribe46thKenyan
Miaraka amin'ny sentom-pitsaharana no ilazan'i Wanjiku Revolution hoe : Nandevina fotsiny ihany an'ireo ‘vautours' tao anaty fasana itambaram-be sy misy afo mipololotra ny Keniana. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
hihazomana (nitranga in-1) : Tokony hisy fanampiana ara-bola manoloana ny zava-misy ho an'ny fitaterana an-tanety hihazomana ny saran-dalana, ho an'ny fitaterana an'habakabaka indray mba hampihenana ny saran'ny tapakila mankaty Madagasikara ka hampiakatra ny isan'ireo mpizaha tany hatrany amin'ny 50% amin'ity taona ity. (Tsara hay)
talen' (nitranga in-2) : Maina be toy ireny efa hitantsika ireny dia avy eo mivatravatra be ny orana », hoy Raveloarisoa Sahondrarilala, talen'ny fitrandrahana mikasika ny toetr'andro. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
Ivato (nitranga in-1) : na dia tsy nahafeno hipoka ny efitrano malalaky ny CCI Ivato aza, dia mbola nambabo ny fon'ny mpijery ny Malok”ila 13 Mey,naseho voalohany omaly tamin'ny efitrano maherin'ny 80 manerana ny Nosy. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
ankapobenydia (nitranga in-1) : Tamin'ny ankapobeny,dia maro tamin'ireo mpijery tonga teny an-toerana no sambany no nijery mivantana ny horonantsary. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
nihevitra (nitranga in-1) : Miaramila telo hafa nanao tazan-davitra no nihevitra fa dahalo ireo fokonolona niaraka tamin'ireo miaramila nanara-dia. (Fitifirana tany Sakaraha – Ahiana hihetsika indray ny havan’ ireo olona fito maty)
noentiko (nitranga in-1) : Maro ireo zavatra nolazainy no noentiko nihoitra tamin'ny fiainana. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Ratsiraka (nitranga in-2) : Etsy ankilan'izay dia nilaza ny haka ny hevitry ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka mahakasika ny fisafidianana kandidà hiatrika io fifidianana io ireo mpikatroka Arema miara-dia amin'i Vaovao Benjamin. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
mampety (nitranga in-2) : «Tsy toy ny teo aloha intsony aloha fa somary misy banga ihany izany fianam-pianakaviana izany saingy tsy maintsy halamina araka izay mampety azy ny fandaharam-potoana. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Hotontosaina (nitranga in-1) : Hotontosaina amin'ny faran'ny herinandro izao ny manasa-dalana. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
hampanana (nitranga in-1) : Hany, ka tsy tanteraka intsony na ilay vina napetraka mba hampanana ny tsy manana aza. (Izay voa aza tezitra!)
niarahana (nitranga in-1) : Nisy fotoana izy io niarahana tamin'ireo miaramila frantsay mitoby aty amin'ny faritry ny Ranomasimbe indianina », hoy ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny Tafika malagasy. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
Remenabila (nitranga in-1) : KITRA LALAOVIN'OLONA FITO – Tafakatra hiady famaranana ny tarik'i Remenabila
Anarana tanim-boanjo. (Sombiny)
Nahitana (nitranga in-2) : « Nahitana olana momba ny tsy fanajana ny zon'olombelona ny sehatra rehetra, indrindra hatramin'ny nisian'ny krizy. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
Ekipa (nitranga in-2) : Ekipa iray hanampy azy ireo ny Tam Anosibe, izay nampiondrika ny miaramila tamin'ny alalan'ny isa 22 no ho 16. (Sombiny)
Lahiniko (nitranga in-1) : Etsy ankilan'izay dia efa nilaza ny hanolotra kandidà amin'ny fifidianana Filoham- pirenena ihany koa ny an-toko Psdum, tarihin'i Lahiniko Jean izay sady filohan'ny vondrona politika Udr-Fanovana. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Fafinaretan' (nitranga in-1) : Fafinaretan'ny filohan'ny Cenit ihany koa ny mitakosina amin'ireo fianakaviany
Masiaka be ronono Mahitsy fiteny, tsy tia olona mandainga na mangalatra ihany koa raha i Atallah Béatrice. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Dominique (nitranga in-1) : Tetsy amin'ny La Rotonde, ny sabotsy lasa teo no nanoloran'i Dominique Raherison (filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha), ny ekipany. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
tompondakan' (nitranga in-3) : isa 15 no ho 13 no nandavoan'Ankadifotsy ny ekipan'ny Lagara
Tsy isan'ireo ekipa efatra hiatrika ny manasa-dalana eo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Filoha, ny UAS Cheminot, izay tompondakan'i Madagasikara farany. (Anjoron- »CAN »)
Rafolisisoa (nitranga in-1) : Hita izany teo amin'ny vehivavy, ny ankizy, ny olona manana fahasembanana, ny mpitandro filaminana, … saingy efa nisy ihany ny paikady », hoy Rafolisisoa Hanitriniala, filoha nasionalin'ny Unmdh. (Zon’olombelona – Niroborobo ny herisetra an-tokantrano sy ny ady tany)
Itrangan' (nitranga in-1) : Itrangan'io fanaovana herisetra io avokoa ny sarangam-piarahamonina rehetra. (Zon’olombelona – Niroborobo ny herisetra an-tokantrano sy ny ady tany)
nandrisika (nitranga in-1) : Katolika rahateo ny raiko ary izy no nandrisika ahy hitia an'Andriamanitra. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
anatiny (nitranga in-1) : Lamba avokoa no tao anatiny ary antony tena nampiitatra ny afo vetivety izany. (Tanjombato – Trano telo fitahirizan-damban’ny orinasa iray kilan’ny afo)
Ankadifotsy (nitranga in-1) : Niondrika teo anatrehan'ny US Ankadifotsy tamin'ny alalan'ny isa 15 no ho 13 ity ekipan'ny Lagara ity teo amin'ny ampahefa-dalana notontosaina omaly teny amin'ny kianja Makis Andohatapenaka. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
nikipy (nitranga in-1) : Talohan'ny nikipin'ny masony dia nanafatrafatra ahy ny hiahy ireo iraitampo amiko ny raiko ary notazomiko sy notanterahako izany hafatra izany», hoy i Béatrice Atallah. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Razafimanana (nitranga in-1) : Toy izany ihany koa i Jean Christin Razafimanana (filohan'ny ligin'Atsinanana), Boto Marcel (filohan'Ihorombe) ary Jean de Capistran Rakotovaoarilala (filohan'i Matsiatra ambony). (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Robert (nitranga in-1) : «Izy ihany no tompon'ny teny farany amin'ny fisafidianana izay kandidan'ny Arema ka miandry izany izahay», hoy ny fanazavan'
i Robert Razaka, mpikatroka Arema sady mpikambana ao anatin'ny vondrona politika Hpm. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
adidy (nitranga in-1) : Fantatr'izy ireo tsara rahateo fa sarotra ny adidy sy ny andraikitra miandry ahy eto amin'ny firenena ka manohana akaiky amin'izany izy ireo», araka ny fanamarihana nataon'ny filohan'ny Cenit ihany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nanaovana (nitranga in-1) : Teny amin'ny fokontany Andranoambo Andohatapenaka no nanaovana izany mba hanentanana ny olona hanadio. (Tapatapany)
anodnroana (nitranga in-1) : @gothrockstar80 naneho fomba fijery mifanohitra amin'izay :
Ny zava-misy dia na #BallotRevolution na tsia, mbola hifidy an'ireo #Mpigs (tsilalaonteny anodnroana ny MP, solombavam-bahoaka) hiverina eo ihany isika http://wp. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
hotely (nitranga in-1) : Amin'iny Vohilava mandalo ny hotely Soanambo mitohy amin'ny faritra Atsinanana iny no tena mafy ny delestazy. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
tiako (nitranga in-1) : «Tamin'ny mbola tanora dia tiako koa ny manao «tennis», araka ny nomarihany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nentina (nitranga in-1) : Nandoro vatam-paty 200 mahery ireo mpanao hetsi-panoherana, nentina naneho ny “fahafatesan'ny tsimatimanota & tsy fahaiza-mitantana” ataon'ireo Mpikamban'ny Parlemanta ao Kenya, izay vao haingana teo no nanondrotra ny tombontsoany sy ny karaman'izy ireo ihany. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
anatina (nitranga in-1) : Mpikambana ao anatina fikambanana mpanao asa sosialy maro ihany koa ny filohan'ny Cenit. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
lefitry (nitranga in-1) : 750 000 euros ho an'ny lefitry ny tompondaka, 374 000 euros sy 300 000 euros ho an'ny laharana fahatelo sy fahefatra. (Anjoron- »CAN »)
taonan' (nitranga in-1) : Ity hetsi-panoherana ity dia midika fitsaharan'ny dimy taonan'ny tsimatimanota nataon'ny Parlemanta faha-10. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Fiara (nitranga in-2) : Fiara mifono vy sy izay mety ho fitaovam-piadiana vaventy eo am-pelantanan'ny Tafika malagasy no ampiasaina any Tampoketsa, lalana mankany Mahajanga amin'izao fotoana izao. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
Star (nitranga in-1) : Efa miparitaka manerana ny Nosy nanomboka ny 14 janoary lasa teo ny zava-pisotro mampahatanjaka Xxl amin'ny tavoahandy 30 sl vokarin'ny orinasa Star. (Tapatapany)
nokianina (nitranga in-1) : Izany tokoa ny politika: raha loko mainty nokianina omaly, nivadika ho fotsy mangatsakatsaka ankasitrahana ankehitriny. (Izay voa aza tezitra!)
nahatonga (nitranga in-1) : Tiako ho marihana fa efa karazana antso nataon'Andriamanitra tamiko no nahatonga ahy nanapa-kevitra hirotsaka an-tsehatra hitantana ny raharaham-pifidianana io», hoy ihany ny filohan'ny Cenit. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Ranaivoarison (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'io lisitra io ihany koa i Lala Norovololoniaina Rasoanomenjanahary sy Onja Ravakiniaina Ranaivoarison, izay filoha sy sekretera jeneralin'ny seksionan'Antananarivo renivohitra. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Uhuru (nitranga in-2) : Ilay fizorana tsy misy herisetra, ampilaminana dia ho avy ao amin'ny Kianja Uhuru mankany amin'ny parlemanta, miaraka aminà saina keniana an'arivony manohitra ireo ‘vautours' no sady milanja vatam-paty. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
anilihan' (nitranga in-1) : Any amin'ny saran'ny jiro sy ny rano mihatra amin'izao fotoana izao izay tsy mifandraika amin'ny fandanian'ny orinasa no anilihan'ny Jirama ny tsy fahafahan'izy ireo mikojakoja araka ny tokony ho izy ny fitaovana ampiasainy. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
pirenena (nitranga in-1) : Etsy ankilan'izay dia efa nilaza ny hanolotra kandidà amin'ny fifidianana Filoham- pirenena ihany koa ny an-toko Psdum, tarihin'i Lahiniko Jean izay sady filohan'ny vondrona politika Udr-Fanovana. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
hotanterahina (nitranga in-1) : Fakana bahana fotsiny ihany izany ilay fanekena ny tsy ho kandidà amin'ny fifidianana hotanterahina amin'ny taona ity. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
Nampiova (nitranga in-1) : Nampiova zavatra betsaka teo amin'ny tontolo politika ilay fanapahan-kevitra hoe tsy hilatsaka. (Izay voa aza tezitra!)
Nody (nitranga in-1) : « Nody avy hatrany izy ireo ny tolakandro rehefa notsaboina sy nokarakaraina », raha ny fanampim-panazavany ihany. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
Lycée (nitranga in-1) : Tao amin'ny Lycée an'Ambositra indray no afaka bakalorea izay vao nisafidy ny hianatra ny lalam-piofanana lalàna ka lasa mpitsara. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
hitakiana (nitranga in-1) : Mba tsy hisian'ny tsimatimanota sy ny valifaty politika no antony hitakiana izany», araka ny notsipihin'i Saraha Georget Rabe-arisoa. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
Raherison (nitranga in-1) : Tetsy amin'ny La Rotonde, ny sabotsy lasa teo no nanoloran'i Dominique Raherison (filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha), ny ekipany. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
StumbleUpon (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
club (nitranga in-1) : Hikatroka amin'ny klioban'ny FCT, na Foot ball club Tsarahonenana izy amin'ny alahady 27 janoary izao,ao amin'ny kianja Manampisoa, ao Masindray. (Sombiny)
hisolo (nitranga in-1) : «Tsy maintsy ho sahirana amin'ny fisafidianana izay olona hisolo azy ny Filohan'ny tetezamita. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
tampo (nitranga in-4) : Ankizilahikely efatra, mpiray tampo no narary ny zoma 18 janoary teo, tany Toliara, voamarina ho noho ny nihinanan'izy ireo ny karazana trondron-dranomasina antsoina hoe botana. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
tanànan' (nitranga in-1) : pOLISY MANADIO
Misahana ny asa rehetra momba ny fanadiovana sy ny fampandrosoana ny tanànan'Antananarivo ny polisy monisipaly. (Tapatapany)
novelesy (nitranga in-1) : Naratra novelesin'izy ireo tamin'ny vodibasy teo amin'ny lohany ilay lehilahy », hoy ny tatitry ny zandary. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
Roger (nitranga in-1) : Ny antoko Rpm dia efa nilaza ny hanolotra ny filohany Ralison Roger. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Bafana (nitranga in-5) : tsay nampoizina i Cap Vert raha nihaona tamin'ny Bafana Bafana
Voatanan'i Cap Vert ady sahala samy tsy nitoko i Afrika Atsimo mpampiantrano ny fiadiana ny amboaran'i Afrika eo amin'ny baolina kitra, na ny Can 2013, ny sabotsy lasa teo. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Andrianavalona (nitranga in-1) : « Nalefa notsaboina avy hatrany teny amin' ny hôpitaly Joseph Ravo-ahangy Andrianavalona ireo olona naratra ireo. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
dimbiasan' (nitranga in-1) : maina dimbiasan'ny oram-be mahatondra-drano tahaka izao ny eto Antananarivo ankehitriny
Fotoam-pahavaratra. (Toetr’andro – Miova ny toetry ny rotsak’orana eto amintsika)
Juliano (nitranga in-1) : Isan'izany ny Anaf, Fizafato, Inner Weel…
Nangonin'i Juliano Randrianja. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Atallah (nitranga in-8) : vehivavy tso-piaina, tia manasoa olona ary tia mandray andraikitra eo amin'ny fianam-pianakaviana i Atallah Béatrice, filohan'ny Vvaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Cenit). (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
efan' (nitranga in-1) : «Sakamalao sy havozo isika ka samy manana ny hanitra ho azy, ny taotrano hono tsy ho efan'ny irery, ny hahamarin-toerana ny tsirairay amin'ny fifidianana no tena zava-dehibe, koa andao re hifanome tanana», hoy ity farany nandritra ny lahateny nataony ho fanokafana ny kaongresy nasionalin'ny antoko tarihiny, tetsy amin'ny «Hotel Carlton» Anosy, ny sabotsy teo. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
nifanekena (nitranga in-1) : Niditra an-tsehatra ny tompon'andraikitra ka nifanekena fa hanome omby ny havan'ny maty ireo miaramila nitifitra. (Fitifirana tany Sakaraha – Ahiana hihetsika indray ny havan’ ireo olona fito maty)
natolotry (nitranga in-1) : Fe-potoana 2 minitra 13 segaondra no nahazoany an'io amboara natolotry ny klioba MSA io. (Sombiny)
niharihary (nitranga in-1) : Tsy vitan'izay fa mbola niharihary ihany koa ny fanagiazana ny sehatry ny fandraharahana teto amin'ity firenena ity, ka nivadika ho an'ny tombontsoany manokana. (Izay voa aza tezitra!)
gazoala (nitranga in-1) : Ar 3 400 ohatra ny litatry ny solika, Ar 2 760 ny litatry ny gazoala ary Ar 2 180 ny litatry ny solitany eo anivona tobin-dasantsy iray ao Analavory. (Tapatapany)
fotodrafitrasa (nitranga in-3) : Fanehoana tanjaka mifanindran-dalana amina fambaboana fo ihany koa ny fitokanana ireo fotodrafitrasa maro tany an-drenivohitr'i Betsimisaraka. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
iraitampo (nitranga in-1) : Talohan'ny nikipin'ny masony dia nanafatrafatra ahy ny hiahy ireo iraitampo amiko ny raiko ary notazomiko sy notanterahako izany hafatra izany», hoy i Béatrice Atallah. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Nikatona (nitranga in-1) : MPINO
VORY LANONA Nikatona avokoa ny ankamaroan'ny fiangonana rehetra manerana ny sahan'ny Fjkm omaly. (Tapatapany)
Faralala (nitranga in-3) : Faralala. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
namonjy (nitranga in-1) : Nanambara ity mpitsabo ity, fa nahazoana namonjy haingana ireto ankizy ireto ny nanatonan'izy ireo ny tobim-pahasalamana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
Digital (nitranga in-2) : Tamin'ny ankapobeny, dia nisy ny ezaka nataon'ny Scoop Digital tamin'ny fanatsarana ny lafiny teknika. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
klioban' (nitranga in-2) : Hikatroka amin'ny klioban'ny FCT, na Foot ball club Tsarahonenana izy amin'ny alahady 27 janoary izao,ao amin'ny kianja Manampisoa, ao Masindray. (Sombiny)
hampihenana (nitranga in-1) : Tokony hisy fanampiana ara-bola manoloana ny zava-misy ho an'ny fitaterana an-tanety hihazomana ny saran-dalana, ho an'ny fitaterana an'habakabaka indray mba hampihenana ny saran'ny tapakila mankaty Madagasikara ka hampiakatra ny isan'ireo mpizaha tany hatrany amin'ny 50% amin'ity taona ity. (Tsara hay)
hatrehana (nitranga in-1) : «Ny lasa dia homba ny lasa fa ny ho avy foana no tokony hatrehana sy hatao izay mampety azy», hoy izy. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
fanambaràna (nitranga in-1) : Notsindrian'ny mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, Cathérine Ashton, tao anatin'ny fanambaràna nivoaka ny sabotsy teo ny tokony hanohizana ireo ezaka rehetra amin'ny fampiharana ny sori-dalàna. (Sombiny)
ampilaminana (nitranga in-1) : Ilay fizorana tsy misy herisetra, ampilaminana dia ho avy ao amin'ny Kianja Uhuru mankany amin'ny parlemanta, miaraka aminà saina keniana an'arivony manohitra ireo ‘vautours' no sady milanja vatam-paty. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
nanakoako (nitranga in-1) : samy nampiseho ny maha izy azy i Diho sy Maalesh tetsy amin'ny IFM
Mozika hafa indray no nanakoako tetsy amin'ny IFM, ny takarivan'ny zoma teo. (IFM Analakely – Nanakoako ny mozika nentin-drazana mahorey sy kaomôrianina)
horaisy (nitranga in-1) : Ny ankolafy Ravalomanana indray dia mbola milaza ny hiandry izay fanapahan-kevitra horaisin'ny mpanorina ny orinasa Tiko amin'izay kandidà harotsany hiatrika io fifidianana io. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
mihinana (nitranga in-2) : Vary amin'anana
Ny mihinana vary amin'anana sy ny kitoza na saosisy no tena ankafiziny. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
fiatrehana (nitranga in-1) : Mia-loha izay fiatrehana ny fifidianana izay anefa dia nandroso hevitra ny amin' ny tokony hirosoana amin'ny fametrahana ireo fepetra rehetra izay hiantoka ny fitoniana eto Madagasikara ity antoko ity. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
Keniana (nitranga in-5) : Nanao antso ho an'ireo Keniana mpiray tanindrazana aminy izy ireo mba tsy handrotsaka vato hifidy indray ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta mandritra ireo fifidianana solombavambahoaka hatao ato ho ato, voalahatra ho ny 4 Martsa. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
ampirisihana (nitranga in-1) : Tokony hahitsy foana ny fomba fijery fa izay mahavita zavatra eto amin'ny firenena dia tokony hoderaina sy ampirisihana hatrany mba hanohy izany satria tsy ho an'ny mpanao politika ireny fa ho an'ny vahoaka. (Izay voa aza tezitra!)
narahy (nitranga in-1) : “
Teo amin'ny Cross Car indray dia i Nomenjanahary Rakotoarimanana na i Kash no tonga voalohany narahin'i Jouvelin Razanamparany sy Nicky Delmote. (Sombiny)
Senatera (nitranga in-1) : Senatera teo aloha ary mpikambana ao amin'ny Cst ankehitriny no voalaza ihany koa fa naka vola be tamin'ny iray tamin' ireo olona mitaraina rehefa nilaza ho mahavita mandamina ny raharaha. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
hiova (nitranga in-1) : Aoka isika tsy ho anaty fisalasalàna: tsy mbola ho ato ho ato no hiova akory izao tarehin-javatra izao. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
aspirine (nitranga in-1) : Raha latsak'ireo andro ireo na mahery dia tokony hizaha mpitsabo », raha ny torohevitra hatrany, ary fadiana ny fihinanana fanafody ahitana singana « aspirine ». (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
Nangony (nitranga in-2) : Nangonin'i Roméo Andriamihaja. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nilaza (nitranga in-7) : Mpitsabo maro momba ny vehivavy anefa no nilaza fa misy zavatra tsy ara-dalàna ny toe-batan'ilay vehivavy matoa izany mitranga. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
naratra (nitranga in-4) : lehilahy mpamboly iray no naratra novonoin'ny jiolahy efatra nirongo basy sy fitaovana famakiana trano, ny alin'ny zoma 18 janoary teo tokony ho tamin'ny 11 ora sy sasany alina, tany Analavory. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
Voarara (nitranga in-1) : Voarara tsy azo hanina toy ny karazana tondron-dranomasina botana ihany koa ny geba rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
ekipa (nitranga in-3) : isa 15 no ho 13 no nandavoan'Ankadifotsy ny ekipan'ny Lagara
Tropicale (nitranga in-1) : Lavon'ny 3FB 25 no ho 17 kosa ny ekipan'ny Savonnerie Tropicale milalao (STM). (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
marihana (nitranga in-1) : Tiako ho marihana fa efa karazana antso nataon'Andriamanitra tamiko no nahatonga ahy nanapa-kevitra hirotsaka an-tsehatra hitantana ny raharaham-pifidianana io», hoy ihany ny filohan'ny Cenit. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Barphil (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
nividianana (nitranga in-1) : Ny vola azo tamin'ny fandraisana anjara tamin'io fifaninanana nomena anarana hoe « Mafibe » io no nividianana ny ondry sy ny fanamiana fitondra milalao, izay omena ny mpandresy sy ny resy. (Sombiny)
Raharinaivo (nitranga in-1) : Mahatonga aretina hafa tsy mampiteraka na mahafaty mihitsy io raha tsy voatsabo », hoy kosa ny Pr Raharinaivo Odilon. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
Miroborobo (nitranga in-1) : « Miroborobo io tranga io amin'izao fotoana. (Fiainam-pianakaviana – Miha kely taona ny zazavavy very manaraka lehilahy)
Marcel (nitranga in-1) : Toy izany ihany koa i Jean Christin Razafimanana (filohan'ny ligin'Atsinanana), Boto Marcel (filohan'Ihorombe) ary Jean de Capistran Rakotovaoarilala (filohan'i Matsiatra ambony). (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
tale (nitranga in-1) : Tsy mitsahatra manara-maso ny fihavian'ny rivo-doza kosa ny fiomanan'ny sampandraharaha mpamantatra ny toetr'andro », hoy hatrany iry tale iry. (Toetr’andro – Miova ny toetry ny rotsak’orana eto amintsika)
mitsahatra (nitranga in-1) : Tsy mitsahatra manara-maso ny fihavian'ny rivo-doza kosa ny fiomanan'ny sampandraharaha mpamantatra ny toetr'andro », hoy hatrany iry tale iry. (Toetr’andro – Miova ny toetry ny rotsak’orana eto amintsika)
anaovan' (nitranga in-1) : Raha nanodidina ny 15 sy 16 taona ny ankamaroan'ireo zaza very anaovan'ny fianakaviany fitarainana tany aloha, dia hita tamin'ireo fitarainana voaray eny anivon'ny sampandraharahan'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny tranga mamoafady (Pmpm) fa miha midina io sokajin-taona io, ka manjary 11 sy 12 taona ankehitriny. (Fiainam-pianakaviana – Miha kely taona ny zazavavy very manaraka lehilahy)
basket (nitranga in-1) : nitohy teny amin'ny kianjan'Andraisoro ny faran'ny herinandro teo ny fifaninanana basket « Fety de Basikety ». (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
facebook (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
fahataran' (nitranga in-1) : Nitokona tsy nety hanao fanazarantena intsony ny ekipa iray manontolo tamin'ny zoma lasa teo noho ny fahataran'ny tambin-karaman'izy ireo nampanantenain'ny fanjakana congoley. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
congoley (nitranga in-1) : Nitokona tsy nety hanao fanazarantena intsony ny ekipa iray manontolo tamin'ny zoma lasa teo noho ny fahataran'ny tambin-karaman'izy ireo nampanantenain'ny fanjakana congoley. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
manga (nitranga in-1) : Manodidina ny Ar 2 000, ohatra, ny 1 kg amin'ny paiso, Ar 4 000 ny voaloboka, Ar 2 000 ny manga ary Ar 1 000 ny garana. (Tapatapany)
namita (nitranga in-1) : Tao amin'ny sekolin-dry masera tany an-toerana izy no namita ny fianarana ambaratonga voalohany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
hampiakarina (nitranga in-1) : “Tokony hampiakarina ny tetibola atokana ho an'ny fahasalamam-bahoaka hihoarana ny fahantrana. (Tsara hay)
Nicky (nitranga in-1) : “
fahavononany (nitranga in-1) : Ity farany izay nindrana ny hiran'ny tarika Mahaleo «hiaraka isika» noentiny nanehoana izay fahavononany ny handeha lavitra amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena izay, io omaly io. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
Sahondrarilala (nitranga in-1) : Maina be toy ireny efa hitantsika ireny dia avy eo mivatravatra be ny orana », hoy Raveloarisoa Sahondrarilala, talen'ny fitrandrahana mikasika ny toetr'andro. (Toetr’andro – Miova ny toetry ny rotsak’orana eto amintsika)
Houssen (nitranga in-1) : Isan'ireo mandrafitra izany ary hitana ny toeran'ny sekretera jeneraly i Maeva Portos Houssen, filohan'ny ligin'i Boeny teo aloha. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
garana (nitranga in-1) : Manodidina ny Ar 2 000, ohatra, ny 1 kg amin'ny paiso, Ar 4 000 ny voaloboka, Ar 2 000 ny manga ary Ar 1 000 ny garana. (Tapatapany)
CHALLENGER (nitranga in-3) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
fiandrianana (nitranga in-1) : Aza hadinoina, fa mba olona nahavita azy ihany koa Ravalomanana Marc tamin'ny fotoan'andro, saingy ny fisisihana sy ny fankamamiana diso tafahoatra ilay seza fiandrianana no nampangarika ny mason-bahoaka taminy. (Izay voa aza tezitra!)
Ambatomaro (nitranga in-3) : nisy nitomany, tao ireo tohina ary tsy vitsy ireo nalahelo, tamin'ireo mponina eny Ambatomaro raha nitantara ny voalaza fa fibodoan'ny mpitandro ny filaminana iray sy ny fianakaviany ny tany sy fitrandrahana vato eny an-toerana. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
voamarina (nitranga in-1) : Ankizilahikely efatra, mpiray tampo no narary ny zoma 18 janoary teo, tany Toliara, voamarina ho noho ny nihinanan'izy ireo ny karazana trondron-dranomasina antsoina hoe botana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
nety (nitranga in-1) : Nitokona tsy nety hanao fanazarantena intsony ny ekipa iray manontolo tamin'ny zoma lasa teo noho ny fahataran'ny tambin-karaman'izy ireo nampanantenain'ny fanjakana congoley. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Rahamefy (nitranga in-1) : hAZAKAZA-PIARAKODIA “SLALOM”
Norombahin'i Teddy Rahamefy izay nitondra Peugeot 205 ny laharana voalohany teo amin'ny dingana fahatelo ho an'ny hazakaza-piarakodia Slalom notontosaina teny Bevalala ny faran'ny herinandro teo. (Sombiny)
hiandry (nitranga in-1) : Ny ankolafy Ravalomanana indray dia mbola milaza ny hiandry izay fanapahan-kevitra horaisin'ny mpanorina ny orinasa Tiko amin'izay kandidà harotsany hiatrika io fifidianana io. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
hobaikoan' (nitranga in-1) : Io no mahatonga ny fifidianana ao Kenya hobaikoan'ny fifidianana ara-poko. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Ghana (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
Vokatra Afrika atsimo # Cap Vert (0 – 0) Maroc # Angola (0 – 0) Ghana # RD Congo (2 – 2) Mali # Niger. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Ankasina (nitranga in-1) : Nandohalika teo anatrehan'ny TFM Ankasina amin'ny alalan'ny isa 23 no ho 20 ny FT Manjakaray. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
Escopol (nitranga in-1) : Ny antoko Grad Iloafo mpikambana eo anivon'ny vondrona politika Escopol dia efa nampiseho ny fano-hanany ny Filohan'ny an-toko Mts, Roland Ratsiraka. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
nampiondrika (nitranga in-1) : Ekipa iray hanampy azy ireo ny Tam Anosibe, izay nampiondrika ny miaramila tamin'ny alalan'ny isa 22 no ho 16. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
twitter (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
mampiteraka (nitranga in-2) : Tsy mampiteraka ary mety hahafaty mihitsy ny fadimbolana maharary maharitra ela loatra », hoy ny Dr Ramiandrisoa Koloina. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
fizahantany (nitranga in-2) : Na olon-tsotra na mpisehatra amin'ny fizahantany dia mikaikaika amin'ny fikorontanan'ny fitadiavana andavanandro noho ny fahatapahan-jiro. (Tsara hay)
mitovitovy (nitranga in-1) : Rehefa mitovitovy tanjaka mantsy toa sarotra ihany ny hino hoe hisy hifandefitra mora foana izany. (Maka maro)
2018 (nitranga in-2) : naneho ampahibemaso ny firotsahany ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena amin'ny taona 2018 ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
hitondrana (nitranga in-1) : Fotoana efa voaomana mialoha natokan'ity fiangonana ity hitondrana am-bavaka sy hifampiarahabana amin'ny filohan'ny Fjkm sy ny asa rehetra eo anivon'izany fiangonana izany io notanterahina io. (Tapatapany)
Josée (nitranga in-1) : Hatra- min'ny taona 1986 aho no nangataka ny tany ary efa intelo izay no nisy fitsirihana vita», hoy kosa Ravaorisoa Merline Josée, nitaraina. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
anatrehan' (nitranga in-3) : Niondrika teo anatrehan'ny US Ankadifotsy tamin'ny alalan'ny isa 15 no ho 13 ity ekipan'ny Lagara ity teo amin'ny ampahefa-dalana notontosaina omaly teny amin'ny kianja Makis Andohatapenaka. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
vitan' (nitranga in-1) : Tsy vitan'izay fa mbola niharihary ihany koa ny fanagiazana ny sehatry ny fandraharahana teto amin'ity firenena ity, ka nivadika ho an'ny tombontsoany manokana. (Izay voa aza tezitra!)
2013 (nitranga in-7) : tsay nampoizina i Cap Vert raha nihaona tamin'ny Bafana Bafana
Voatanan'i Cap Vert ady sahala samy tsy nitoko i Afrika Atsimo mpampiantrano ny fiadiana ny amboaran'i Afrika eo amin'ny baolina kitra, na ny Can 2013, ny sabotsy lasa teo. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
2012 (nitranga in-2) : Ratsy fiditra toa an'i Afrika Atsimo ihany koa omaly ny Ganeanina, izay niatrika ny dingan'ny manasa-dalana tamin'ny Can 2012. (Tsara hay)
TMB2A (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
vodibasy (nitranga in-1) : Naratra novelesin'izy ireo tamin'ny vodibasy teo amin'ny lohany ilay lehilahy », hoy ny tatitry ny zandary. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
amiko (nitranga in-4) : Isan'ny tena zava-dehibe amiko ny mijery sy manampy ny fianakaviako», araka ny nomarihany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
hataony (nitranga in-1) : Olona be fandeferana izy saingy masiaka sy sarotiny amin'ny zavatra izay hataony. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
torohevitra (nitranga in-1) : Raha latsak'ireo andro ireo na mahery dia tokony hizaha mpitsabo », raha ny torohevitra hatrany, ary fadiana ny fihinanana fanafody ahitana singana « aspirine ». (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
Vohilava (nitranga in-3) : Taorian'i Nosy-Be sy Antalaha dia ireo mponin'i Vohilava ao Sainte-Marie indray no milaza ny hanao karazana fitokonana eo anoloan'ny biraon'ny Jirama ao Barachois anio manomboka amin'ny 10 ora maraina. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
kilometatra (nitranga in-1) : Vehivavy isan'ny tia zaridaina i Atallah Béatrice
Taizan-dry masera Tsy avy ao Antalaha tsy akory i Atallah Béatrice, araka ny voalazany fa fanontaniana mipetraka aminy matetika, fa avy ao Ankaramena, tanàna kely 30 kilometatra miala an'i Taolagnaro. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
pitsarana (nitranga in-1) : hampahalala ny momba azy ny Foibem- pitsarana sy mpanelanelanana eto Madagasikara na Camm amin'ny 22 janoary izao. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
haharetan' (nitranga in-1) : « Telo na dimy andro ihany no tokony haharetan'ny fotoana ara-dalàna. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
azon' (nitranga in-1) : Rehefa azon'izy ireo ilay vola dia lasa izy ireo nandositra sady nandrahona tamin'ny basy izay olona mitady hanaraka azy », hoy hatrany ny zandary avy any an-toerana. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
ahafahan' (nitranga in-1) : Hamorao ny fampiasam-bola
Eo amin'ny tontolon'ny fampiasam-bola indray dia manoso-kevitra ny amin'ny tokony hahazoan'ireo mpampiasa vola eto an-toerana tombontsoa manokana ahafahan'izy ireo mamorona asa ny Crem. (Tsara hay)
Rotonde (nitranga in-1) : Tetsy amin'ny La Rotonde, ny sabotsy lasa teo no nanoloran'i Dominique Raherison (filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha), ny ekipany. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Lamba (nitranga in-1) : Lamba avokoa no tao anatiny ary antony tena nampiitatra ny afo vetivety izany. (Tanjombato – Trano telo fitahirizan-damban’ny orinasa iray kilan’ny afo)
ahatongavan' (nitranga in-1) : « Amin'ny andro voalohany na faharoa ahatongavan'ny fadim-bolana no mety hitrangan'ny fanaintainana, saingy raha mitohy aorian'izay io marary io dia tokony hanatona mpitsabo. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
Andriantsizehena (nitranga in-1) : Noho izany dia tsy maintsy hano-lotra anarana kandidà any aminy izahay ary mety hisy ny fiaraha-miasa akaiky amin' ny antoko Tgv mahakasika izany», hoy i Benja Urbain Andriantsizehena, sekretera jeneralin'ny vondrona politika Udr-Fanovana avy amin'ny antoko Rpsd. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Reboza (nitranga in-1) : Ny minisitry ny Rano, Reboza Julien no avy hatrany dia nilaza ho «velombolo tamin'ity fanambarana ity ». (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
hifanome (nitranga in-1) : «Sakamalao sy havozo isika ka samy manana ny hanitra ho azy, ny taotrano hono tsy ho efan'ny irery, ny hahamarin-toerana ny tsirairay amin'ny fifidianana no tena zava-dehibe, koa andao re hifanome tanana», hoy ity farany nandritra ny lahateny nataony ho fanokafana ny kaongresy nasionalin'ny antoko tarihiny, tetsy amin'ny «Hotel Carlton» Anosy, ny sabotsy teo. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
niaviany (nitranga in-1) : Fidian-dry zareo izy ireny arakaraky ny foko niaviany. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
tratry (nitranga in-1) : Tsy ny ao Nosy-Be ihany anefa fa hatrao Mahanoro dia tratry ny fahatapahan-jiro lava toy io. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
Kenya (nitranga in-3) : Nandoro vatam-paty 200 mahery ireo mpanao hetsi-panoherana, nentina naneho ny “fahafatesan'ny tsimatimanota & tsy fahaiza-mitantana” ataon'ireo Mpikamban'ny Parlemanta ao Kenya, izay vao haingana teo no nanondrotra ny tombontsoany sy ny karaman'izy ireo ihany. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
nihinana (nitranga in-1) : Nahandro sy nihinana izany izy efatra mirahalahy zanany, io zoma io, tokony ho tamin'ny 6 ora sy sasany maraina. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
hanohana (nitranga in-2) : Ireo antoko politika eo anivon'ny hery politika mitambatra (Hpm) indray dia samy hanohana ireo kandidany. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
nahavita (nitranga in-1) : Aza hadinoina, fa mba olona nahavita azy ihany koa Ravalomanana Marc tamin'ny fotoan'andro, saingy ny fisisihana sy ny fankamamiana diso tafahoatra ilay seza fiandrianana no nampangarika ny mason-bahoaka taminy. (Izay voa aza tezitra!)
hanasarotra (nitranga in-1) : Hiakatra 3% fahantran'ny vola ka hanasarotra ny fihazomana ny sandan'ny Ariary. (Tsara hay)
Victoire (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Joseph (nitranga in-2) : Gaga aho ankehitriny fa misy mpitandro ny filaminana sy tompon' andraikitra amin'ny fitakiana hetra mandrahona ny mponina ary avy hatrany dia managadra raha tsy manaiky ny fakan'izy ireo ny tany », hoy Ramarolahy Joseph, komitim-pokontany eny Ambatomaro no sady tompon'andraikitra ao amin'ilay faritra misy ny olana. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
nitondra (nitranga in-3) : hAZAKAZA-PIARAKODIA “SLALOM”
Norombahin'i Teddy Rahamefy izay nitondra Peugeot 205 ny laharana voalohany teo amin'ny dingana fahatelo ho an'ny hazakaza-piarakodia Slalom notontosaina teny Bevalala ny faran'ny herinandro teo. (IFM Analakely – Nanakoako ny mozika nentin-drazana mahorey sy kaomôrianina)
Meynaseho (nitranga in-1) : na dia tsy nahafeno hipoka ny efitrano malalaky ny CCI Ivato aza, dia mbola nambabo ny fon'ny mpijery ny Malok”ila 13 Mey,naseho voalohany omaly tamin'ny efitrano maherin'ny 80 manerana ny Nosy. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
borna (nitranga in-1) : Loharanom-baovao hafa kosa no nahafantarana fa efa vita borna ireo tany. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
ligy (nitranga in-5) : Roméo Andriamihaja
Voahosotra ho tompondaka ny FT Manjakaray Norombahin'ny FT Manjakaray omaly, izay nisolo tena ny ligin'Analamanga, tamin'ny alalan'ny isa mavesatra 51 no ho 19 teo anatrehan'Atsinanana ny anaram-boninahitra tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy “junior”. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
tapakilan' (nitranga in-1) : Tapitra tanteraka ny tapakilan'ny lanonam-panokafana ny Can 2013 ny sabotsy lasa teo tany Afrika Atsimo, araka ny loharanom-baovao. (Anjoron- »CAN »)
Vert (nitranga in-5) : tsay nampoizina i Cap Vert raha nihaona tamin'ny Bafana Bafana
horonantsary (nitranga in-5) : mbola nampiseho ny naha “role”azy Rajao izay voaporofo tamin'ny tehaka azony rehefa misy ny seho sy sehatra manaitra ao anatin'ny horonantsary. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
nampoizina (nitranga in-1) : tsay nampoizina i Cap Vert raha nihaona tamin'ny Bafana Bafana
etiopianina (nitranga in-1) : Tambazan'ny federasiona etiopianina ho an'ny baolina kitra 100 000 dolara isan'olona ny Antilopes Walya raha mahazo ny amboaran'i Afrika, izay hatao atsy Afrika Atsimo. (Anjoron- »CAN »)
fiovaovan' (nitranga in-1) : Raha ny fanazavany dia ny fiovaovan'ny toetr'andro no antony mahatonga izany, izay efa mihatra eto amintsika. (Toetr’andro – Miova ny toetry ny rotsak’orana eto amintsika)
Tiako (nitranga in-1) : Tiako ho marihana fa efa karazana antso nataon'Andriamanitra tamiko no nahatonga ahy nanapa-kevitra hirotsaka an-tsehatra hitantana ny raharaham-pifidianana io», hoy ihany ny filohan'ny Cenit. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Rakotovaoarilala (nitranga in-1) : Toy izany ihany koa i Jean Christin Razafimanana (filohan'ny ligin'Atsinanana), Boto Marcel (filohan'Ihorombe) ary Jean de Capistran Rakotovaoarilala (filohan'i Matsiatra ambony). (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
hihoarana (nitranga in-1) : “Tokony hampiakarina ny tetibola atokana ho an'ny fahasalamam-bahoaka hihoarana ny fahantrana. (Tsara hay)
nitohy (nitranga in-1) : nitohy teny amin'ny kianjan'Andraisoro ny faran'ny herinandro teo ny fifaninanana basket « Fety de Basikety ». (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Ralison (nitranga in-1) : Ny antoko Rpm dia efa nilaza ny hanolotra ny filohany Ralison Roger. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
tenany (nitranga in-4) : Vavimatoan'ny fianakaviana rahateo ny tenany izay isan'ireo akaiky ny rainy indrindra amin'ireo iray tampo aminy. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
dingan' (nitranga in-3) : Lalao tsy dia nampoizin'ny rehetra loatra satria na dia vao sambany tamin'ity taona ity aza ireto Antsantsa mangan'i Cap Vert ireto vao tafita amin'ny dingan'ny famaranana dia azo heverina fa nahita fahombiazana teo amin'ny lalao voalohany nataon'izy ireo. (Anjoron- »CAN »)
nampangarika (nitranga in-1) : Aza hadinoina, fa mba olona nahavita azy ihany koa Ravalomanana Marc tamin'ny fotoan'andro, saingy ny fisisihana sy ny fankamamiana diso tafahoatra ilay seza fiandrianana no nampangarika ny mason-bahoaka taminy. (Izay voa aza tezitra!)
nahita (nitranga in-1) : Lalao tsy dia nampoizin'ny rehetra loatra satria na dia vao sambany tamin'ity taona ity aza ireto Antsantsa mangan'i Cap Vert ireto vao tafita amin'ny dingan'ny famaranana dia azo heverina fa nahita fahombiazana teo amin'ny lalao voalohany nataon'izy ireo. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
tavoahandy (nitranga in-1) : Efa miparitaka manerana ny Nosy nanomboka ny 14 janoary lasa teo ny zava-pisotro mampahatanjaka Xxl amin'ny tavoahandy 30 sl vokarin'ny orinasa Star. (Tapatapany)
Sunwords (nitranga in-1) : #ballotrevolution
Ankoatry ny zavatra hafa dia manasongadina ny bilaogy Sunwords hoe : Mandindona antsika indray izao ny fotoana hifidianan'ny Keniana mpitarika vaovao. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
tanàna (nitranga in-3) : Raha ny teny amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana no mahazatra ny maro dia mirotsaka an-tsehatra tamin'ny fanadiovana tanàna kosa izy ireo, ny sabotsy teo. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nanatontosa (nitranga in-1) : Nifamotoana teny Antsahamanitra avokoa ny mpino rehetra nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. (Tapatapany)
Revolution (nitranga in-1) : me/ptBPN-6X avy amin'i @Tribe46thKenyan
Kiva (nitranga in-1) : olona 6 no naratra vokatry ny fivadihana fiara mpitatitra olona iray marika « Mercedes sprinter » tany amin'iny lalam-pirenena faha-4 iny, teo amin'ny toerana an-tsoina hoe Manankazo ao amin'ny fokontanin'i Kiva, kaominina ambani- vohitr'Ankazobe, ny sabotsy 19 janoary teo tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany maraina. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
Andraisoro (nitranga in-4) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
fitahirizan' (nitranga in-1) : trano telo fitahirizan'entana ana orinasa mpanao lamba iray no nirehitra tetsy Tanjom-bato akaikin'ny »Zone Forello », ny alin'ny sabotsy teo tokony ho tamin'ny 9 ora. (Tanjombato – Trano telo fitahirizan-damban’ny orinasa iray kilan’ny afo)
Cenit (nitranga in-8) : Tsy manaiky ny hanovana ny tetiandrom-pifidianana napetraky ny Cenit sy ny Firenena Mikambana ihany koa ity antoko ity. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
RAAA (nitranga in-1) : Toby miaramila telo dia ny RAAA sy ny RAS eny Betongolo ary ny RAL any Imerintsiatosika izay misy ireo fitaovam-piadiana mavesatra no milatsaka an-tsehatra miaraka amin'ny Hery vonjy taitra eo anivon'ny Tafika malagasy manao ity fanazarantena ity. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
Iloafo (nitranga in-1) : Ny antoko Grad Iloafo mpikambana eo anivon'ny vondrona politika Escopol dia efa nampiseho ny fano-hanany ny Filohan'ny an-toko Mts, Roland Ratsiraka. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Niger (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
hanimba (nitranga in-1) : Mety hanimba tante- raka ny firaisankinan'ireo vondrona sy ankolafy politika nanasonia ny sori-dalana ny fisafidianana kandidà hiatrika ny fifidianana Filoham-pirenena. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Diho (nitranga in-3) : samy nampiseho ny maha izy azy i Diho sy Maalesh tetsy amin'ny IFM
Rakotomalala (nitranga in-1) : I Herizo Rakotozafy, izay nitondra Clio RS , no teo amin'ny laharana faharoa raha i Sitraka Rakotomalala (nitondra clio) no teo amin'ny fahatelo. (Sombiny)
nampidiny (nitranga in-1) : Nisy nampidinin'ity orinasa ity ny vidin'izany toy ny ao Mahajanga. (Tapatapany)
Razafimahefa (nitranga in-1) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
mpanazatrany (nitranga in-1) : Vao tamin'ny sabotsy teo anefa no niverina nanao fanazarantena ity farany, taorian'ny saika nametrahan'i Claude le Roy, mpanazatrany, fialana. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Martin (nitranga in-1) : Voafidy ho filohan'ny Filankevi-pitondran'ny Camm, Rakotozafy Jean Martin, izay filohan'ny CCIA na Antenimieran'ny Varotra eto Antananarivo. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Swahily (nitranga in-1) : Tsara rakotry ny media mahazatra ilay hetsika no sady hita be teny anaty fantsona media sosialy Facebook sy Twitter teo ambanin'ny tenifototra: #StateFuneral #LoveProtest ary #KenyaniKwetu (Fanamarihana: fiteny Swahili midika hoe “Antsika i Kenya”). (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
sasan­tsasany (nitranga in-1) : Tokony harahin'ny fampidinana ny fandanian'ny Fanjakana sasan­tsasany anefa ny fanomezana io fanampiana io. (Tsara hay)
fahampian' (nitranga in-1) : Eo ny mety tsy fahampian'ny fitaovana enti-miatrika ilay izy, fa miankina amin'ny laharam-pamehana eo anivon'ny lehibe ihany koa anefa izany. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
delicious (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
Amparibe (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
tsimatimanota (nitranga in-4) : Mba tsy hisian'ny tsimatimanota sy ny valifaty politika no antony hitakiana izany», araka ny notsipihin'i Saraha Georget Rabe-arisoa. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
botana (nitranga in-2) : Ankizilahikely efatra, mpiray tampo no narary ny zoma 18 janoary teo, tany Toliara, voamarina ho noho ny nihinanan'izy ireo ny karazana trondron-dranomasina antsoina hoe botana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
Nandoro (nitranga in-1) : Nandoro vatam-paty 200 mahery ireo mpanao hetsi-panoherana, nentina naneho ny “fahafatesan'ny tsimatimanota & tsy fahaiza-mitantana” ataon'ireo Mpikamban'ny Parlemanta ao Kenya, izay vao haingana teo no nanondrotra ny tombontsoany sy ny karaman'izy ireo ihany. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
sehatry (nitranga in-2) : Tsy vitan'izay fa mbola niharihary ihany koa ny fanagiazana ny sehatry ny fandraharahana teto amin'ity firenena ity, ka nivadika ho an'ny tombontsoany manokana. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
nihoitra (nitranga in-2) : Zanaka mpivarotra ary nipetraka tany ambanivohitra fa nihoitra tamin'ny fiainana izy, araka ny fitantarany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nandroso (nitranga in-1) : Mia-loha izay fiatrehana ny fifidianana izay anefa dia nandroso hevitra ny amin' ny tokony hirosoana amin'ny fametrahana ireo fepetra rehetra izay hiantoka ny fitoniana eto Madagasikara ity antoko ity. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
nitambatra (nitranga in-1) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
taty (nitranga in-2) : ZAVA-PISOTRO
Enim-bolana taty aoriana. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
hisorohana (nitranga in-1) : Manafatrafatra hatrany ireo mpitsabo mba tsy hinanana afa-tsy ireo voankazo masaka mba hisorohana ireo karazan'aretina samihafa…. (Tapatapany)
nahazoana (nitranga in-1) : Nanambara ity mpitsabo ity, fa nahazoana namonjy haingana ireto ankizy ireto ny nanatonan'izy ireo ny tobim-pahasalamana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
ambaran' (nitranga in-1) : ny fanatonana mpitsabo ihany no ambaran'ireo dokotera fa vahaolana amin'ny fadimbolana maharary. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
zanany (nitranga in-2) : Nahandro sy nihinana izany izy efatra mirahalahy zanany, io zoma io, tokony ho tamin'ny 6 ora sy sasany maraina. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
vinavinan' (nitranga in-1) : ny fahitan'ireo mpahay hary ny toekarena amin'ity taona 2013 ity
hofidiana (nitranga in-1) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
hahatanteraka (nitranga in-1) : Marina fa betsaka amin'ireo kandidà no dibon-kafaliana satria tsy misy ho tafainga ireo «Favoris» roa lahy amin'ny fifidianana ho avy, saingy ho sendra ny taolana, indrindra raha tsy hahatanteraka ny fanambiny nape- trany, mihoatra noho izao iainana amin'ny tetezamita izao. (Izay voa aza tezitra!)
izaoao (nitranga in-1) : Hikatroka amin'ny klioban'ny FCT, na Foot ball club Tsarahonenana izy amin'ny alahady 27 janoary izao,ao amin'ny kianja Manampisoa, ao Masindray. (Sombiny)
Nairoby (nitranga in-1) : ny 16 Janoary 2013, natao tao Nairobi renivohitra ny hetsi-panoherana am-pilaminana teo ambanin'ny teny faneva Fandevenana Fanjakàna #BallotRevolution. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
hatolotry (nitranga in-1) : Tapaka tao anatin'ity kaongresy nasionaly ity fa ny Filo-hany Saraha Georget Rabearisoa no hatolotry ny antoko maitso Hasin'i Madagasikara ho kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
tian' (nitranga in-1) : Atallah sy ny zanany
Mpanao karaté Isan'ny fialam-boly tian'ny filohan'ny Cenit ny manao fanatanjahantena. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Wellers (nitranga in-1) : Nanara-dia azy mirahalahy tamin'io fampisehoana io i Jean Wellers (zava-maneno nentin-drazana kaomôrianina) sy Jimmy Rakotoson (Amponga maroanaka)
FR. (IFM Analakely – Nanakoako ny mozika nentin-drazana mahorey sy kaomôrianina)
hamerenana (nitranga in-1) : Tokony hisy ezaka manokana atao hamerenana ny fahatokisan'ny banky manoloana ireo fifanakalozam-bola atao. (Tsara hay)
Betongolo (nitranga in-1) : Toby miaramila telo dia ny RAAA sy ny RAS eny Betongolo ary ny RAL any Imerintsiatosika izay misy ireo fitaovam-piadiana mavesatra no milatsaka an-tsehatra miaraka amin'ny Hery vonjy taitra eo anivon'ny Tafika malagasy manao ity fanazarantena ity. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
1977 (nitranga in-1) : « Hatramin'ny taona 1977 aho no efa komitim-pokontany teto Ambatomaro ka hatramin'izao. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
anoloan' (nitranga in-1) : Taorian'i Nosy-Be sy Antalaha dia ireo mponin'i Vohilava ao Sainte-Marie indray no milaza ny hanao karazana fitokonana eo anoloan'ny biraon'ny Jirama ao Barachois anio manomboka amin'ny 10 ora maraina. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
nanjakazaka (nitranga in-1) : Teo amin'ny 30 minitra nilalaovana dia efa nanjakazaka tanteraka teo amin'ny famezivezena baolina i Cap Vert. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
tenako (nitranga in-1) : «Tena taizan-dry masera mihitsy ny tenako. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
mine (nitranga in-1) : « Nopitsohan'ireo olon-dratsy tamin'ny « barre à mine » ny tranon'ilay mpamboly, ka rehefa tafiditra tao an-trano izy ireo dia niditra tao amin'ny efitra nisy an'ilay lehilahy ary nanambana ity farany tamin'ny basy nentin'izy ireo. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
Person (nitranga in-1) : Ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta dian nandany ihany koa ny hahazoan'ny tsirairay amin'izy ireo mpiambina manokana mitam-piadiana, pasipaoro diplaomatika ho an'ireo misotro ronono sy ny vadiny ary fahafahana miditra tsy misy fetra amin'ny toerana fandraisana olona ambony- na Very Important Person (VIP) any amin'ireo seranam-piaramanidina rehetra ao anatin'i Kenya. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Pierrot (nitranga in-1) : Tsilian-tsofina anefa no nahafantarana fa isan'ireo mety hirotsaka amin'ny anarany manokana hiatrika an'io fifidianana io i Botozaza Pierrot. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
hifidianan' (nitranga in-1) : #ballotrevolution
nilalaovana (nitranga in-1) : Teo amin'ny 30 minitra nilalaovana dia efa nanjakazaka tanteraka teo amin'ny famezivezena baolina i Cap Vert. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
nisehoany (nitranga in-1) : Nahitana fivoarana anefa ny tantara, na teo amin”ny votoatiny na tamin'ny endrika nisehoany. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
Christian (nitranga in-1) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
notsipihy (nitranga in-1) : Mba tsy hisian'ny tsimatimanota sy ny valifaty politika no antony hitakiana izany», araka ny notsipihin'i Saraha Georget Rabe-arisoa. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
notontosaina (nitranga in-2) : Niondrika teo anatrehan'ny US Ankadifotsy tamin'ny alalan'ny isa 15 no ho 13 ity ekipan'ny Lagara ity teo amin'ny ampahefa-dalana notontosaina omaly teny amin'ny kianja Makis Andohatapenaka. (Sombiny)
nenty (nitranga in-2) : nentin'ny tsy fahafantarana. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
diplaomatika (nitranga in-1) : Ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta dian nandany ihany koa ny hahazoan'ny tsirairay amin'izy ireo mpiambina manokana mitam-piadiana, pasipaoro diplaomatika ho an'ireo misotro ronono sy ny vadiny ary fahafahana miditra tsy misy fetra amin'ny toerana fandraisana olona ambony- na Very Important Person (VIP) any amin'ireo seranam-piaramanidina rehetra ao anatin'i Kenya. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
segaondra (nitranga in-1) : Fe-potoana 2 minitra 13 segaondra no nahazoany an'io amboara natolotry ny klioba MSA io. (Sombiny)
hitondra (nitranga in-1) : «Tokony hiaiky ny heloka nataony sy hitondra ny fifonana amin'ny Malagasy ireo olona rehetra homena famotsoran-keloka. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
Naratra (nitranga in-1) : Naratra novelesin'izy ireo tamin'ny vodibasy teo amin'ny lohany ilay lehilahy », hoy ny tatitry ny zandary. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
TEAM (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Foot (nitranga in-1) : Hikatroka amin'ny klioban'ny FCT, na Foot ball club Tsarahonenana izy amin'ny alahady 27 janoary izao,ao amin'ny kianja Manampisoa, ao Masindray. (Sombiny)
isaky (nitranga in-2) : Ireo nambara fa tompon' antoka tamin'ilay fitifirana no voatondro hanolotra omby 100 isaky ny olona maty, izany hoe mahatratra 700 no takin' ny fianakavian'ireo maty. (Fitifirana tany Sakaraha – Ahiana hihetsika indray ny havan’ ireo olona fito maty)
napetraka (nitranga in-1) : Hany, ka tsy tanteraka intsony na ilay vina napetraka mba hampanana ny tsy manana aza. (Izay voa aza tezitra!)
notsaboina (nitranga in-2) : « Nody avy hatrany izy ireo ny tolakandro rehefa notsaboina sy nokarakaraina », raha ny fanampim-panazavany ihany. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
KShs (nitranga in-1) : 3 tapitrisa KShs ireo mpikambana tao amin'ny parlemanta ho toy ny fifanaovam-beloma. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
napetraky (nitranga in-1) : Tsy manaiky ny hanovana ny tetiandrom-pifidianana napetraky ny Cenit sy ny Firenena Mikambana ihany koa ity antoko ity. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
nandratra (nitranga in-1) : « Nilaozan'ny hisatra ilay fiara tamin'ny fidirany tao anaty fiolahana ka nivadibadika ary izany no nandratra ireo olona enina ireo », hoy ny tatitra avy amin' ny zandarimaria any an-toerana. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
hanohitra (nitranga in-1) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Ramenason (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Rasoanomenjanahary (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'io lisitra io ihany koa i Lala Norovololoniaina Rasoanomenjanahary sy Onja Ravakiniaina Ranaivoarison, izay filoha sy sekretera jeneralin'ny seksionan'Antananarivo renivohitra. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Julien (nitranga in-1) : Ny minisitry ny Rano, Reboza Julien no avy hatrany dia nilaza ho «velombolo tamin'ity fanambarana ity ». (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
Fizafato (nitranga in-1) : Isan'izany ny Anaf, Fizafato, Inner Weel…
Mandindona (nitranga in-1) : #ballotrevolution
amn' (nitranga in-1) : Na izany aza, indro kelin'ny mpandrafitra tamin'ity andiany ity ny fisian'ny feo avy any ambadika, izay tsy mifandray amn'ny sary aseho na dia tokony ho hita ao anatin'ny horonantsary aza. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
fihazomana (nitranga in-1) : Hiakatra 3% fahantran'ny vola ka hanasarotra ny fihazomana ny sandan'ny Ariary. (Tsara hay)
Ramarolahy (nitranga in-1) : Gaga aho ankehitriny fa misy mpitandro ny filaminana sy tompon' andraikitra amin'ny fitakiana hetra mandrahona ny mponina ary avy hatrany dia managadra raha tsy manaiky ny fakan'izy ireo ny tany », hoy Ramarolahy Joseph, komitim-pokontany eny Ambatomaro no sady tompon'andraikitra ao amin'ilay faritra misy ny olana. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
Makis (nitranga in-1) : Niondrika teo anatrehan'ny US Ankadifotsy tamin'ny alalan'ny isa 15 no ho 13 ity ekipan'ny Lagara ity teo amin'ny ampahefa-dalana notontosaina omaly teny amin'ny kianja Makis Andohatapenaka. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
ilazan' (nitranga in-1) : me/ptBPN-6X avy amin'i @Tribe46thKenyan
karaté (nitranga in-1) : Atallah sy ny zanany
nodongian' (nitranga in-1) : « 72 ara ny taniko no nodongian'ireo olona ireo. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
nampiitatra (nitranga in-1) : Lamba avokoa no tao anatiny ary antony tena nampiitatra ny afo vetivety izany. (Tanjombato – Trano telo fitahirizan-damban’ny orinasa iray kilan’ny afo)
monisipaly (nitranga in-1) : pOLISY MANADIO
Hanitry (nitranga in-2) : Hanitry Ny Aina. (Tsara hay)
Ramanantsoa (nitranga in-1) : Monica Rasoloarison/Francis Ramanantsoa. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
poketrako (nitranga in-1) : «Isan'ireo tena akaiky ahy io anadahiko izay efa nodimandry io ary tsy misaraka amiko aty anaty poketrako aty mihitsy ny sariny. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
indro (nitranga in-2) : Na izany aza, indro kelin'ny mpandrafitra tamin'ity andiany ity ny fisian'ny feo avy any ambadika, izay tsy mifandray amn'ny sary aseho na dia tokony ho hita ao anatin'ny horonantsary aza. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Roland (nitranga in-1) : Ny antoko Grad Iloafo mpikambana eo anivon'ny vondrona politika Escopol dia efa nampiseho ny fano-hanany ny Filohan'ny an-toko Mts, Roland Ratsiraka. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
nonina (nitranga in-1) : Hita ihany avy eo ireo ankizy, izay milaza avokoa fa nitsoaka ny tokantranon-dray aman-dreniny, ka nonina tany amin'ny sakaizany », hoy ny fanamafisan'ny kaomisera Ramilijohn Hanitra, eo anivon'ny Pmpm eny Anosy. (Fiainam-pianakaviana – Miha kely taona ny zazavavy very manaraka lehilahy)
mampilamina (nitranga in-1) : Izay no mba isan'ny mampilamina ny saiko», hoy izy. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
hanovana (nitranga in-1) : Tsy manaiky ny hanovana ny tetiandrom-pifidianana napetraky ny Cenit sy ny Firenena Mikambana ihany koa ity antoko ity. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
ahafahana (nitranga in-1) : Tokony hamoraina ihany koa ireo fombafomba tokony arahina rehetra ahafahana misintona ireo mpampiasa vola vahiny. (Tsara hay)
nanarahako (nitranga in-1) : “Saika tamin'ny kapila mangirana hatrany no nanarahako ny tantara, fa hay misy ambiansa hafa mihitsy rehefa mijery mivantana”, araka ny fanamarihan'i Michel R. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
Chantal (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Basikety (nitranga in-1) : nitohy teny amin'ny kianjan'Andraisoro ny faran'ny herinandro teo ny fifaninanana basket « Fety de Basikety ». (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Ganeanina (nitranga in-1) : Ratsy fiditra toa an'i Afrika Atsimo ihany koa omaly ny Ganeanina, izay niatrika ny dingan'ny manasa-dalana tamin'ny Can 2012. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
ahafahany (nitranga in-1) : Tokony homena ny hoenti-manana ihany koa ny eo anivon'ny sampana misahana ny antontan'isa ahafahany manaparitaka ireo vaovao rehetra ilain'ireo mpandray anjara ao anatin'ny toekarena”. (Tsara hay)
handrotsaka (nitranga in-1) : Nanao antso ho an'ireo Keniana mpiray tanindrazana aminy izy ireo mba tsy handrotsaka vato hifidy indray ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta mandritra ireo fifidianana solombavambahoaka hatao ato ho ato, voalahatra ho ny 4 Martsa. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
notanterahako (nitranga in-1) : Talohan'ny nikipin'ny masony dia nanafatrafatra ahy ny hiahy ireo iraitampo amiko ny raiko ary notazomiko sy notanterahako izany hafatra izany», hoy i Béatrice Atallah. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nolanian' (nitranga in-1) : Nolavin'ny Filoha Kibaki ny volavolan-dalàna momba ny Tonbontsoan'ireo Mpisotro Ronono nolanian'ny Antenimieram-Pirenena tamin'ny Alakamisy 10 Janoary 2013. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
nandadilady (nitranga in-1) : Maro no Tonga Saina ka niverin-dalana nandadilady indray, raha nanakiana be fahatany fotsiny tany am-boalohany. (Izay voa aza tezitra!)
nampoizy (nitranga in-1) : Lalao tsy dia nampoizin'ny rehetra loatra satria na dia vao sambany tamin'ity taona ity aza ireto Antsantsa mangan'i Cap Vert ireto vao tafita amin'ny dingan'ny famaranana dia azo heverina fa nahita fahombiazana teo amin'ny lalao voalohany nataon'izy ireo. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
nahafahany (nitranga in-1) : Nahatsara azy ihany koa, ankoatra izany, ny nandoa, nahafahany namoaka ny poizina avy amin'ireo trondro. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
mpampiantrano (nitranga in-1) : tsay nampoizina i Cap Vert raha nihaona tamin'ny Bafana Bafana
hanarahana (nitranga in-1) : Isan'izany ny amin' ny tokony hanarahana araka ny tokony ho izy ireo fepetra rehetra momba ny famotsoran-keloka. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
Razaka (nitranga in-1) : «Izy ihany no tompon'ny teny farany amin'ny fisafidianana izay kandidan'ny Arema ka miandry izany izahay», hoy ny fanazavan'
mpikatroka (nitranga in-2) : Etsy ankilan'izay dia nilaza ny haka ny hevitry ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka mahakasika ny fisafidianana kandidà hiatrika io fifidianana io ireo mpikatroka Arema miara-dia amin'i Vaovao Benjamin. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Norombahy (nitranga in-2) : Roméo Andriamihaja
Voahosotra ho tompondaka ny FT Manjakaray Norombahin'ny FT Manjakaray omaly, izay nisolo tena ny ligin'Analamanga, tamin'ny alalan'ny isa mavesatra 51 no ho 19 teo anatrehan'Atsinanana ny anaram-boninahitra tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy “junior”. (Sombiny)
nanatonan' (nitranga in-1) : Nanambara ity mpitsabo ity, fa nahazoana namonjy haingana ireto ankizy ireto ny nanatonan'izy ireo ny tobim-pahasalamana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
nampihaonana (nitranga in-1) : Efa nisy ny ezaka natao nanatona tompon'andraikitra hatrany amin'ny minisitera misy ilay mpitandro ny filaminana, ka nampihaonana anay, saingy zava-poana izany. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
nanehoana (nitranga in-1) : Ity farany izay nindrana ny hiran'ny tarika Mahaleo «hiaraka isika» noentiny nanehoana izay fahavononany ny handeha lavitra amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena izay, io omaly io. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
nitantara (nitranga in-1) : nisy nitomany, tao ireo tohina ary tsy vitsy ireo nalahelo, tamin'ireo mponina eny Ambatomaro raha nitantara ny voalaza fa fibodoan'ny mpitandro ny filaminana iray sy ny fianakaviany ny tany sy fitrandrahana vato eny an-toerana. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
navotan' (nitranga in-1) : Efa saika resy tamin'ity lalao ity ny Bafana Bafana, saingy navotan'ny mpiandry tsatokazo hatrany. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Inner (nitranga in-1) : Isan'izany ny Anaf, Fizafato, Inner Weel…
ireto (nitranga in-6) : Lalao tsy dia nampoizin'ny rehetra loatra satria na dia vao sambany tamin'ity taona ity aza ireto Antsantsa mangan'i Cap Vert ireto vao tafita amin'ny dingan'ny famaranana dia azo heverina fa nahita fahombiazana teo amin'ny lalao voalohany nataon'izy ireo. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
nihinanan' (nitranga in-1) : Ankizilahikely efatra, mpiray tampo no narary ny zoma 18 janoary teo, tany Toliara, voamarina ho noho ny nihinanan'izy ireo ny karazana trondron-dranomasina antsoina hoe botana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
nadika (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
reddit (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
Afrika (nitranga in-10) : tsay nampoizina i Cap Vert raha nihaona tamin'ny Bafana Bafana
Voatanan'i Cap Vert ady sahala samy tsy nitoko i Afrika Atsimo mpampiantrano ny fiadiana ny amboaran'i Afrika eo amin'ny baolina kitra, na ny Can 2013, ny sabotsy lasa teo. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Crem (nitranga in-3) : ny fahitan'ireo mpahay hary ny toekarena amin'ity taona 2013 ity
harahy (nitranga in-1) : Tokony harahin'ny fampidinana ny fandanian'ny Fanjakana sasan­tsasany anefa ny fanomezana io fanampiana io. (Tsara hay)
seksionan' (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'io lisitra io ihany koa i Lala Norovololoniaina Rasoanomenjanahary sy Onja Ravakiniaina Ranaivoarison, izay filoha sy sekretera jeneralin'ny seksionan'Antananarivo renivohitra. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Mahanoro (nitranga in-1) : Tsy ny ao Nosy-Be ihany anefa fa hatrao Mahanoro dia tratry ny fahatapahan-jiro lava toy io. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
Cathérine (nitranga in-1) : Notsindrian'ny mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, Cathérine Ashton, tao anatin'ny fanambaràna nivoaka ny sabotsy teo ny tokony hanohizana ireo ezaka rehetra amin'ny fampiharana ny sori-dalàna. (Sombiny)
hanohizana (nitranga in-1) : Notsindrian'ny mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, Cathérine Ashton, tao anatin'ny fanambaràna nivoaka ny sabotsy teo ny tokony hanohizana ireo ezaka rehetra amin'ny fampiharana ny sori-dalàna. (Sombiny)
Nolavy (nitranga in-1) : Nolavin'ny Filoha Kibaki ny volavolan-dalàna momba ny Tonbontsoan'ireo Mpisotro Ronono nolanian'ny Antenimieram-Pirenena tamin'ny Alakamisy 10 Janoary 2013. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Merline (nitranga in-1) : Hatra- min'ny taona 1986 aho no nangataka ny tany ary efa intelo izay no nisy fitsirihana vita», hoy kosa Ravaorisoa Merline Josée, nitaraina. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
nampanantenay (nitranga in-1) : Nitokona tsy nety hanao fanazarantena intsony ny ekipa iray manontolo tamin'ny zoma lasa teo noho ny fahataran'ny tambin-karaman'izy ireo nampanantenain'ny fanjakana congoley. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
nahitsihitsy (nitranga in-1) : Efa tsy misy intsony rahateo ny rohy mampifamatopatotra ka dia nahitsihitsy sy nivantambantana ny fomba fite- nenana. (Izay voa aza tezitra!)
tapakila (nitranga in-1) : Tokony hisy fanampiana ara-bola manoloana ny zava-misy ho an'ny fitaterana an-tanety hihazomana ny saran-dalana, ho an'ny fitaterana an'habakabaka indray mba hampihenana ny saran'ny tapakila mankaty Madagasikara ka hampiakatra ny isan'ireo mpizaha tany hatrany amin'ny 50% amin'ity taona ity. (Tsara hay)
Cheminot (nitranga in-1) : isa 15 no ho 13 no nandavoan'Ankadifotsy ny ekipan'ny Lagara
Rakotoson (nitranga in-1) : Nanara-dia azy mirahalahy tamin'io fampisehoana io i Jean Wellers (zava-maneno nentin-drazana kaomôrianina) sy Jimmy Rakotoson (Amponga maroanaka)
Peugeot (nitranga in-1) : hAZAKAZA-PIARAKODIA “SLALOM”
mpanelanelanana (nitranga in-1) : hampahalala ny momba azy ny Foibem- pitsarana sy mpanelanelanana eto Madagasikara na Camm amin'ny 22 janoary izao. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Benjamin (nitranga in-1) : Etsy ankilan'izay dia nilaza ny haka ny hevitry ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka mahakasika ny fisafidianana kandidà hiatrika io fifidianana io ireo mpikatroka Arema miara-dia amin'i Vaovao Benjamin. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Tsarahonenana (nitranga in-3) : Tafakatra hiady ny lalao famaranana eo amin'ny kitra lalaovin'olona fito eny Tsarahonenana, kaominina Masindray ny ekipan-dRemenabila. (Sombiny)
namoaka (nitranga in-1) : Nahatsara azy ihany koa, ankoatra izany, ny nandoa, nahafahany namoaka ny poizina avy amin'ireo trondro. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
Razafimandimby (nitranga in-1) : Mbola ho hita eo anefa ny ho tohiny” hoy kosa Razafimandimby Mamitiana, talen'ny Scoop Digital sy mpanatontosa ny horonantsary. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
Njathika (nitranga in-1) : Saribe ho an'ny #BallotRevolution: Nakarin'ilay mpampiasa Twitter @bonifacemwangi
Totoafo (nitranga in-1) : Hiady ny toerana fahatelo kosa ny klioban'i Totoafo sy Manampisoa. (Sombiny)
ataon' (nitranga in-3) : Fanazarantena ataon'ny miaramila amin'ireo fitaovana mavesatra ireo no anton'izany, araka ny fantatra. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
niasa (nitranga in-1) : Ny taona 2002 ka hatramin'ny taona 2009 dia efa niasa tao anatin'ny filankevim-pirerenena misahana ny raharaham-pifidianana ny tenany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
kandidà (nitranga in-12) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
fizotry (nitranga in-1) : hANDEFA IRAKA > Naneho ny fahavono-nany handefa manam-pahaizana manokana hanara-maso ny fizotry ny fanomanana ny fifi-dianana eto amintsika ny Vondrona Eoropeanina. (Sombiny)
hanentanana (nitranga in-1) : Teny amin'ny fokontany Andranoambo Andohatapenaka no nanaovana izany mba hanentanana ny olona hanadio. (Tapatapany)
hahazoan' (nitranga in-2) : Hamorao ny fampiasam-bola
Eo amin'ny tontolon'ny fampiasam-bola indray dia manoso-kevitra ny amin'ny tokony hahazoan'ireo mpampiasa vola eto an-toerana tombontsoa manokana ahafahan'izy ireo mamorona asa ny Crem. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
narary (nitranga in-1) : Ankizilahikely efatra, mpiray tampo no narary ny zoma 18 janoary teo, tany Toliara, voamarina ho noho ny nihinanan'izy ireo ny karazana trondron-dranomasina antsoina hoe botana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
hitsapatsapa (nitranga in-1) : Samy mba hitsapatsapa ny heriny ireo filohan'antoko isan-tsokajiny. (Maka maro)
tiany (nitranga in-1) : Laoka tiany indrindra koa ny trondro endasina miaraka amin'ny ron-tsaramaso. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nisian' (nitranga in-1) : « Nahitana olana momba ny tsy fanajana ny zon'olombelona ny sehatra rehetra, indrindra hatramin'ny nisian'ny krizy. (Zon’olombelona – Niroborobo ny herisetra an-tokantrano sy ny ady tany)
Euros (nitranga in-1) : Hahazo vola 1 124 000 Euros ny ekipa tompondakan'i Afrika amin'ity CAN 2013 ity. (Anjoron- »CAN »)
Razafinarivo (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Maroc (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
mampifamatopatotra (nitranga in-1) : Efa tsy misy intsony rahateo ny rohy mampifamatopatotra ka dia nahitsihitsy sy nivantambantana ny fomba fite- nenana. (Izay voa aza tezitra!)
Ankoatry (nitranga in-1) : #ballotrevolution
Jouvelin (nitranga in-1) : “
Analavory (nitranga in-3) : Ar 3 400 ohatra ny litatry ny solika, Ar 2 760 ny litatry ny gazoala ary Ar 2 180 ny litatry ny solitany eo anivona tobin-dasantsy iray ao Analavory. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
anton' (nitranga in-2) : Ny saran'ny fitaterana izay lafo kokoa no nanazavan'ny tobin-dasantsy ny anton'io fisondrotam-bidy io. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
notanterahina (nitranga in-1) : Fotoana efa voaomana mialoha natokan'ity fiangonana ity hitondrana am-bavaka sy hifampiarahabana amin'ny filohan'ny Fjkm sy ny asa rehetra eo anivon'izany fiangonana izany io notanterahina io. (Tapatapany)
Saraha (nitranga in-3) : misokatra amin'ireo antoko politika sy ireo hery rehetra eto amin'ny firenena izay vonona ny hanohana azy amin'ny fifidianana ny antoko maitso »Hasin'i Mada-gasikara » tarihin'ny filohany, Saraha Georget Rabearisoa. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
marobe (nitranga in-2) : Ny mpifidy no ho valalanina hisafidy amin' ireo anarana marobe. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
ekipany (nitranga in-1) : Tetsy amin'ny La Rotonde, ny sabotsy lasa teo no nanoloran'i Dominique Raherison (filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha), ny ekipany. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
barre (nitranga in-1) : « Nopitsohan'ireo olon-dratsy tamin'ny « barre à mine » ny tranon'ilay mpamboly, ka rehefa tafiditra tao an-trano izy ireo dia niditra tao amin'ny efitra nisy an'ilay lehilahy ary nanambana ity farany tamin'ny basy nentin'izy ireo. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
Roméo (nitranga in-4) : Roméo Andriamihaja
Voahosotra ho tompondaka ny FT Manjakaray Norombahin'ny FT Manjakaray omaly, izay nisolo tena ny ligin'Analamanga, tamin'ny alalan'ny isa mavesatra 51 no ho 19 teo anatrehan'Atsinanana ny anaram-boninahitra tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy “junior”. (Anjoron- »CAN »)
Notsindrian' (nitranga in-1) : Notsindrian'ny mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, Cathérine Ashton, tao anatin'ny fanambaràna nivoaka ny sabotsy teo ny tokony hanohizana ireo ezaka rehetra amin'ny fampiharana ny sori-dalàna. (Sombiny)
Urbain (nitranga in-1) : Noho izany dia tsy maintsy hano-lotra anarana kandidà any aminy izahay ary mety hisy ny fiaraha-miasa akaiky amin' ny antoko Tgv mahakasika izany», hoy i Benja Urbain Andriantsizehena, sekretera jeneralin'ny vondrona politika Udr-Fanovana avy amin'ny antoko Rpsd. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
fiara (nitranga in-4) : olona 6 no naratra vokatry ny fivadihana fiara mpitatitra olona iray marika « Mercedes sprinter » tany amin'iny lalam-pirenena faha-4 iny, teo amin'ny toerana an-tsoina hoe Manankazo ao amin'ny fokontanin'i Kiva, kaominina ambani- vohitr'Ankazobe, ny sabotsy 19 janoary teo tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany maraina. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
Sakaraha (nitranga in-3) : tsy dia mandry fahalemana loatra ny any Sakaraha
firaisankinan' (nitranga in-1) : Mety hanimba tante- raka ny firaisankinan'ireo vondrona sy ankolafy politika nanasonia ny sori-dalana ny fisafidianana kandidà hiatrika ny fifidianana Filoham-pirenena. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Mitsipotipotika (nitranga in-1) : Mitsipotipotika loatra, eo amin'ireo samy antoko marobe. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
nodimandry (nitranga in-1) : «Isan'ireo tena akaiky ahy io anadahiko izay efa nodimandry io ary tsy misaraka amiko aty anaty poketrako aty mihitsy ny sariny. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Michel (nitranga in-1) : “Saika tamin'ny kapila mangirana hatrany no nanarahako ny tantara, fa hay misy ambiansa hafa mihitsy rehefa mijery mivantana”, araka ny fanamarihan'i Michel R. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
Teknisiany (nitranga in-1) : Milina maty foana
Teknisianin'ny Jirama aty Antananarivo no nanazava fa maty ny roa amin'ireo milina dimy mamatsy herinaratra an'i Nosy-Be, ka izay no mahatonga io fahatapahan-jiro io. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
Forello (nitranga in-1) : trano telo fitahirizan'entana ana orinasa mpanao lamba iray no nirehitra tetsy Tanjom-bato akaikin'ny »Zone Forello », ny alin'ny sabotsy teo tokony ho tamin'ny 9 ora. (Tanjombato – Trano telo fitahirizan-damban’ny orinasa iray kilan’ny afo)
ekipan' (nitranga in-4) : isa 15 no ho 13 no nandavoan'Ankadifotsy ny ekipan'ny Lagara
Tsy isan'ireo ekipa efatra hiatrika ny manasa-dalana eo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Filoha, ny UAS Cheminot, izay tompondakan'i Madagasikara farany. (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Soanirina (nitranga in-1) : Tamin'ny 9 ora sy sasany no voalaza fa nanomboka nandoa izy ireo ary tonga nanatona ny hopitaly tamin'ny 11ora sy sasany », hoy ny Dr Soanirina Louisette, tompon'andraikitra momba ny fanaraha-maso ny sakafo any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
nahitana (nitranga in-2) : Mpanakanto avy amin'ny Nosy mirahavavy roa izay nahitana an'i Diho sy Maalesh no niaka-tsehatra, ka nitondra ainga vaovao teo amin'ny sofin'ireo mpankafy mozika malagasy. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
HOMME (nitranga in-3) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
alàlan' (nitranga in-1) : Ho fampahatsiarovana ireo mpitarika ihany koa ilay hetsi-panoherana fa hoe vonona ny hanao revolisiona am-pilaminana amin'ny alàlan'ny fifidianana ny Keniana. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
nambara (nitranga in-1) : Ireo nambara fa tompon' antoka tamin'ilay fitifirana no voatondro hanolotra omby 100 isaky ny olona maty, izany hoe mahatratra 700 no takin' ny fianakavian'ireo maty. (Fitifirana tany Sakaraha – Ahiana hihetsika indray ny havan’ ireo olona fito maty)
hisian' (nitranga in-2) : Mba tsy hisian'ny tsimatimanota sy ny valifaty politika no antony hitakiana izany», araka ny notsipihin'i Saraha Georget Rabe-arisoa. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Rpsd (nitranga in-1) : Noho izany dia tsy maintsy hano-lotra anarana kandidà any aminy izahay ary mety hisy ny fiaraha-miasa akaiky amin' ny antoko Tgv mahakasika izany», hoy i Benja Urbain Andriantsizehena, sekretera jeneralin'ny vondrona politika Udr-Fanovana avy amin'ny antoko Rpsd. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Capistran (nitranga in-1) : Toy izany ihany koa i Jean Christin Razafimanana (filohan'ny ligin'Atsinanana), Boto Marcel (filohan'Ihorombe) ary Jean de Capistran Rakotovaoarilala (filohan'i Matsiatra ambony). (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
lamba (nitranga in-1) : trano telo fitahirizan'entana ana orinasa mpanao lamba iray no nirehitra tetsy Tanjom-bato akaikin'ny »Zone Forello », ny alin'ny sabotsy teo tokony ho tamin'ny 9 ora. (Tanjombato – Trano telo fitahirizan-damban’ny orinasa iray kilan’ny afo)
aminà (nitranga in-1) : Ilay fizorana tsy misy herisetra, ampilaminana dia ho avy ao amin'ny Kianja Uhuru mankany amin'ny parlemanta, miaraka aminà saina keniana an'arivony manohitra ireo ‘vautours' no sady milanja vatam-paty. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
mirefodrefotra (nitranga in-2) : Nahazo tehaka mirefodrefotra tamin'ireo niatrika ity lanonana ity io lahateny nataon'ny Filohan'ny tetezamita io. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
Andohatapenaka (nitranga in-2) : Niondrika teo anatrehan'ny US Ankadifotsy tamin'ny alalan'ny isa 15 no ho 13 ity ekipan'ny Lagara ity teo amin'ny ampahefa-dalana notontosaina omaly teny amin'ny kianja Makis Andohatapenaka. (Tapatapany)
Pmpm (nitranga in-1) : Hita ihany avy eo ireo ankizy, izay milaza avokoa fa nitsoaka ny tokantranon-dray aman-dreniny, ka nonina tany amin'ny sakaizany », hoy ny fanamafisan'ny kaomisera Ramilijohn Hanitra, eo anivon'ny Pmpm eny Anosy. (Fiainam-pianakaviana – Miha kely taona ny zazavavy very manaraka lehilahy)
Savonnerie (nitranga in-1) : Lavon'ny 3FB 25 no ho 17 kosa ny ekipan'ny Savonnerie Tropicale milalao (STM). (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
media (nitranga in-2) : Tsara rakotry ny media mahazatra ilay hetsika no sady hita be teny anaty fantsona media sosialy Facebook sy Twitter teo ambanin'ny tenifototra: #StateFuneral #LoveProtest ary #KenyaniKwetu (Fanamarihana: fiteny Swahili midika hoe “Antsika i Kenya”). (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
nangataka (nitranga in-1) : Hatra- min'ny taona 1986 aho no nangataka ny tany ary efa intelo izay no nisy fitsirihana vita», hoy kosa Ravaorisoa Merline Josée, nitaraina. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
lava (nitranga in-1) : Tsy ny ao Nosy-Be ihany anefa fa hatrao Mahanoro dia tratry ny fahatapahan-jiro lava toy io. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
Ambohimanarina (nitranga in-2) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Ravakiniaina (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'io lisitra io ihany koa i Lala Norovololoniaina Rasoanomenjanahary sy Onja Ravakiniaina Ranaivoarison, izay filoha sy sekretera jeneralin'ny seksionan'Antananarivo renivohitra. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
tratran' (nitranga in-1) : Na dia nitarika tamin'ny alalan'ny isa 2 no ho 0 aza izy ireo hatreo amin'ny minitra faha-50 dia tratran'ny RD Congo 2 no ho 2 ihany tany amin'ny fiafaran'ny lalao. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Imerintsiatosika (nitranga in-1) : Toby miaramila telo dia ny RAAA sy ny RAS eny Betongolo ary ny RAL any Imerintsiatosika izay misy ireo fitaovam-piadiana mavesatra no milatsaka an-tsehatra miaraka amin'ny Hery vonjy taitra eo anivon'ny Tafika malagasy manao ity fanazarantena ity. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
ball (nitranga in-1) : Hikatroka amin'ny klioban'ny FCT, na Foot ball club Tsarahonenana izy amin'ny alahady 27 janoary izao,ao amin'ny kianja Manampisoa, ao Masindray. (Sombiny)
zanako (nitranga in-1) : Rehefa misy ny fotoana dia ny miara-miantsena amin'ny zanako sy ny vadiko no mba mahafinaritra ahy. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Ankaramena (nitranga in-1) : Vehivavy isan'ny tia zaridaina i Atallah Béatrice
harotsany (nitranga in-1) : Ny ankolafy Ravalomanana indray dia mbola milaza ny hiandry izay fanapahan-kevitra horaisin'ny mpanorina ny orinasa Tiko amin'izay kandidà harotsany hiatrika io fifidianana io. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
litatry (nitranga in-3) : Ar 3 400 ohatra ny litatry ny solika, Ar 2 760 ny litatry ny gazoala ary Ar 2 180 ny litatry ny solitany eo anivona tobin-dasantsy iray ao Analavory. (Tapatapany)
Anaf (nitranga in-1) : Isan'izany ny Anaf, Fizafato, Inner Weel…
Tapakila (nitranga in-1) : Tapakila. (Anjoron- »CAN »)
Ambohimirary (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
dôlara (nitranga in-1) : Araka izany dia mety hihoatra ny Ar 3 000 ny Euro, ary hihoatra ny Ar 2 500 ny dôlara. (Tsara hay)
hotohanany (nitranga in-1) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
mpiantsehatra (nitranga in-3) : nanao jery todika ireo mpiantsehatra maro mivondrona ao anatin'ny fivondronana nasionalin'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona (UNMDH) ny faran'ny herinandro teo. (Zon’olombelona – Niroborobo ny herisetra an-tokantrano sy ny ady tany)
avylavitra (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
delestazy (nitranga in-2) : Amin'iny Vohilava mandalo ny hotely Soanambo mitohy amin'ny faritra Atsinanana iny no tena mafy ny delestazy. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
Andriamadison (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Antilopes (nitranga in-1) : Tambazan'ny federasiona etiopianina ho an'ny baolina kitra 100 000 dolara isan'olona ny Antilopes Walya raha mahazo ny amboaran'i Afrika, izay hatao atsy Afrika Atsimo. (Anjoron- »CAN »)
madiodio (nitranga in-1) : An'ny Tafika Malagasy madiodio avokoa ny fitaovana ampiasaina rehetra mandritra ity fanazarantena ity », hoy ihany ny avy eo anivon'ny Tafika. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
Congo (nitranga in-2) : Na dia nitarika tamin'ny alalan'ny isa 2 no ho 0 aza izy ireo hatreo amin'ny minitra faha-50 dia tratran'ny RD Congo 2 no ho 2 ihany tany amin'ny fiafaran'ny lalao. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
hôpitaly (nitranga in-1) : « Nalefa notsaboina avy hatrany teny amin' ny hôpitaly Joseph Ravo-ahangy Andrianavalona ireo olona naratra ireo. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
Psdum (nitranga in-1) : Etsy ankilan'izay dia efa nilaza ny hanolotra kandidà amin'ny fifidianana Filoham- pirenena ihany koa ny an-toko Psdum, tarihin'i Lahiniko Jean izay sady filohan'ny vondrona politika Udr-Fanovana. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Voatanan' (nitranga in-1) : tsay nampoizina i Cap Vert raha nihaona tamin'ny Bafana Bafana
Slalom (nitranga in-1) : hAZAKAZA-PIARAKODIA “SLALOM”
nisitaka (nitranga in-1) : Toy izany koa ny tantara izay maneho kokoa, tranga miala amin'ny fiainana andavanandro ary nisitaka kely tamin'izy telo mirahalahy fototry ny tantara. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
Ravalison (nitranga in-1) : Voatendry ho sekretera jeneraliny kosa Ravalison Johary. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Instapaper (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
euros (nitranga in-4) : 750 000 euros ho an'ny lefitry ny tompondaka, 374 000 euros sy 300 000 euros ho an'ny laharana fahatelo sy fahefatra. (Anjoron- »CAN »)
ampiasainy (nitranga in-1) : Any amin'ny saran'ny jiro sy ny rano mihatra amin'izao fotoana izao izay tsy mifandraika amin'ny fandanian'ny orinasa no anilihan'ny Jirama ny tsy fahafahan'izy ireo mikojakoja araka ny tokony ho izy ny fitaovana ampiasainy. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
sprinter (nitranga in-1) : olona 6 no naratra vokatry ny fivadihana fiara mpitatitra olona iray marika « Mercedes sprinter » tany amin'iny lalam-pirenena faha-4 iny, teo amin'ny toerana an-tsoina hoe Manankazo ao amin'ny fokontanin'i Kiva, kaominina ambani- vohitr'Ankazobe, ny sabotsy 19 janoary teo tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany maraina. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
homba (nitranga in-1) : «Ny lasa dia homba ny lasa fa ny ho avy foana no tokony hatrehana sy hatao izay mampety azy», hoy izy. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Teddy (nitranga in-1) : hAZAKAZA-PIARAKODIA “SLALOM”
avrily (nitranga in-2) : Ny volana novambra hatramin'ny volana avrily no faharetan'ny fotoam-pahavaratra. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
Toamasina (nitranga in-3) : Lalao tsy dia niady loatra izy ity satria saika voa teo amin'ny fanariam-baolina ny avy any Toamasina. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
naharaikitra (nitranga in-1) : Io isan'ny omby io no tsy naharaikitra an'ilay fomba, omaly. (Fitifirana tany Sakaraha – Ahiana hihetsika indray ny havan’ ireo olona fito maty)
Important (nitranga in-1) : Ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta dian nandany ihany koa ny hahazoan'ny tsirairay amin'izy ireo mpiambina manokana mitam-piadiana, pasipaoro diplaomatika ho an'ireo misotro ronono sy ny vadiny ary fahafahana miditra tsy misy fetra amin'ny toerana fandraisana olona ambony- na Very Important Person (VIP) any amin'ireo seranam-piaramanidina rehetra ao anatin'i Kenya. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
biletà (nitranga in-1) : Asa mba hanao ahoana ny ho halavan'ny taratasim-pifidi- anana satria raha ny tokony ho izy dia ilay biletà tokana no hampi- asaina. (Maka maro)
hampihodina (nitranga in-1) : Amin'ity herinandro ity no hidina any ny teknisianina hampihodina io milina io », hoy ny teo anivon'ny foibem-pitondrana misahana ny famatsiana herinaratra manerana ny Nosy. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
hanomezana (nitranga in-1) : Fihetsika iray hanomezana risi-po an'ireo mpilalao taorian'ny fiverenan'izy ireo indray teo amin'ny dingan'ny famaranana ho an'ny Can izany. (Anjoron- »CAN »)
nanafika (nitranga in-1) : Miaramila roa nanao fanamiana sivily no nanara-dia an'ireo dahalo nanafika tany Sakaraha, niaraka tamin'ny fokonolona. (Fitifirana tany Sakaraha – Ahiana hihetsika indray ny havan’ ireo olona fito maty)
hino (nitranga in-1) : Rehefa mitovitovy tanjaka mantsy toa sarotra ihany ny hino hoe hisy hifandefitra mora foana izany. (Maka maro)
mampahatanjaka (nitranga in-1) : Efa miparitaka manerana ny Nosy nanomboka ny 14 janoary lasa teo ny zava-pisotro mampahatanjaka Xxl amin'ny tavoahandy 30 sl vokarin'ny orinasa Star. (Tapatapany)
CCIA (nitranga in-1) : Voafidy ho filohan'ny Filankevi-pitondran'ny Camm, Rakotozafy Jean Martin, izay filohan'ny CCIA na Antenimieran'ny Varotra eto Antananarivo. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Georget (nitranga in-3) : misokatra amin'ireo antoko politika sy ireo hery rehetra eto amin'ny firenena izay vonona ny hanohana azy amin'ny fifidianana ny antoko maitso »Hasin'i Mada-gasikara » tarihin'ny filohany, Saraha Georget Rabearisoa. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
antoky (nitranga in-1) : ny fahitan'ireo mpahay hary ny toekarena amin'ity taona 2013 ity
nenana (nitranga in-1) : Efa tsy misy intsony rahateo ny rohy mampifamatopatotra ka dia nahitsihitsy sy nivantambantana ny fomba fite- nenana. (Izay voa aza tezitra!)
Boto (nitranga in-1) : Toy izany ihany koa i Jean Christin Razafimanana (filohan'ny ligin'Atsinanana), Boto Marcel (filohan'Ihorombe) ary Jean de Capistran Rakotovaoarilala (filohan'i Matsiatra ambony). (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
hiantoka (nitranga in-1) : Mia-loha izay fiatrehana ny fifidianana izay anefa dia nandroso hevitra ny amin' ny tokony hirosoana amin'ny fametrahana ireo fepetra rehetra izay hiantoka ny fitoniana eto Madagasikara ity antoko ity. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
vokary (nitranga in-1) : Efa miparitaka manerana ny Nosy nanomboka ny 14 janoary lasa teo ny zava-pisotro mampahatanjaka Xxl amin'ny tavoahandy 30 sl vokarin'ny orinasa Star. (Tapatapany)
aretina (nitranga in-1) : Mahatonga aretina hafa tsy mampiteraka na mahafaty mihitsy io raha tsy voatsabo », hoy kosa ny Pr Raharinaivo Odilon. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
Anosibe (nitranga in-1) : Ekipa iray hanampy azy ireo ny Tam Anosibe, izay nampiondrika ny miaramila tamin'ny alalan'ny isa 22 no ho 16. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
Niondrika (nitranga in-1) : Niondrika teo anatrehan'ny US Ankadifotsy tamin'ny alalan'ny isa 15 no ho 13 ity ekipan'ny Lagara ity teo amin'ny ampahefa-dalana notontosaina omaly teny amin'ny kianja Makis Andohatapenaka. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
natao (nitranga in-3) : Lalao maromaro no natao teny an-toerana, ka mbola mitarika hatrany ny ekipan'ny Challenger. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
irika (nitranga in-1) : Nionona tamin'ny taktika 4-4-3 tamin'io lalao io izy ireo, ka tsy nahitan'i Bafana irika. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Ampasampito (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Camm (nitranga in-4) : hampahalala ny momba azy ny Foibem- pitsarana sy mpanelanelanana eto Madagasikara na Camm amin'ny 22 janoary izao. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
nijery (nitranga in-2) : Nisy tamin'ireo olona tsy tafiditra no voatery nijery ny lalao tamina fahitalavitra lehibe, izay hita eny an-dalambe. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
paniriana (nitranga in-1) : tsy mitsaha-mitombo isan'andro ny anaran'ireo izay manam- paniriana ny hirotsaka hofidina ho Filoham-pirenena, afaka volana vitsivitsy, raha tsy misy ny fiovan'ny datim-pifidianana. (Maka maro)
AT2B (nitranga in-3) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Bevalala (nitranga in-1) : hAZAKAZA-PIARAKODIA “SLALOM”
Voahosotra (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
Voahosotra ho tompondaka ny FT Manjakaray Norombahin'ny FT Manjakaray omaly, izay nisolo tena ny ligin'Analamanga, tamin'ny alalan'ny isa mavesatra 51 no ho 19 teo anatrehan'Atsinanana ny anaram-boninahitra tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy “junior”. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
Delmote (nitranga in-1) : “
geba (nitranga in-1) : Voarara tsy azo hanina toy ny karazana tondron-dranomasina botana ihany koa ny geba rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
tsatokazo (nitranga in-1) : Efa saika resy tamin'ity lalao ity ny Bafana Bafana, saingy navotan'ny mpiandry tsatokazo hatrany. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
hifandefitra (nitranga in-1) : Rehefa mitovitovy tanjaka mantsy toa sarotra ihany ny hino hoe hisy hifandefitra mora foana izany. (Maka maro)
nalahelo (nitranga in-1) : nisy nitomany, tao ireo tohina ary tsy vitsy ireo nalahelo, tamin'ireo mponina eny Ambatomaro raha nitantara ny voalaza fa fibodoan'ny mpitandro ny filaminana iray sy ny fianakaviany ny tany sy fitrandrahana vato eny an-toerana. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
Tonbontsoan' (nitranga in-1) : Nolavin'ny Filoha Kibaki ny volavolan-dalàna momba ny Tonbontsoan'ireo Mpisotro Ronono nolanian'ny Antenimieram-Pirenena tamin'ny Alakamisy 10 Janoary 2013. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
kaomôrianina (nitranga in-1) : Mpanakanto efa tsy zoviana amin'ny fitrandrahana ny gadona nentin-drazana kaomôrianina i Maalesh ary nanolotra izany tamin'ity seho ity ho an'ny mpijery. (IFM Analakely – Nanakoako ny mozika nentin-drazana mahorey sy kaomôrianina)
iandraiketany (nitranga in-1) : Notsindriany ihany anefa fa misy ihany ny lesoka eo amin'izay fianam-pianakaviany izay noho ny asa iandraiketany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nisolo (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
mpamoaka (nitranga in-1) : Asa sosialy
Eugène (nitranga in-1) : Vao tsy ela izay no nanilika ny antoko Tambatra tsy ho mpikambana ao aminy ny mpitarika ny vondrona politika «Les as», Voninahitsy Jean Eugène. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Marc (nitranga in-3) : Tsy maintsy mbola hihamaro io, indrindra rehefa samy nanaiky ny tsy hirotsaka ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana sy ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina. (Izay voa aza tezitra!)
Nanambara (nitranga in-2) : Nanambara hatrany ny teknisianina fa tsy mbola misy aloha hatramin'izao ny rivo-doza ahiana hiditra. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
Razakanaivo (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Voninahitsy (nitranga in-1) : Vao tsy ela izay no nanilika ny antoko Tambatra tsy ho mpikambana ao aminy ny mpitarika ny vondrona politika «Les as», Voninahitsy Jean Eugène. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
nanoloran' (nitranga in-1) : Tetsy amin'ny La Rotonde, ny sabotsy lasa teo no nanoloran'i Dominique Raherison (filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha), ny ekipany. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
lalàna (nitranga in-4) : Faritan'ny lalàna velona ho fanodinkodinana zaza tsy ampy taona ny fisakaizana amin'ny ankizy tsy ampy taona, na nisy aza ny faneken'ity farany izany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
hampirongatra (nitranga in-1) : Mihoron-koditra ny amin'ny mety hampirongatra ny asan-jiolahy ihany koa. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
lojika (nitranga in-1) : Teo amin'ireo vokatra farany dia saika voahaja avokoa ny lojika. (Rugby Amboaran’ny filoha – Nailik’Ankadifotsy ny Besetroka)
11ora (nitranga in-1) : Tamin'ny 9 ora sy sasany no voalaza fa nanomboka nandoa izy ireo ary tonga nanatona ny hopitaly tamin'ny 11ora sy sasany », hoy ny Dr Soanirina Louisette, tompon'andraikitra momba ny fanaraha-maso ny sakafo any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
fanagiazana (nitranga in-1) : Tsy vitan'izay fa mbola niharihary ihany koa ny fanagiazana ny sehatry ny fandraharahana teto amin'ity firenena ity, ka nivadika ho an'ny tombontsoany manokana. (Izay voa aza tezitra!)
ankilan' (nitranga in-2) : Etsy ankilan'izay dia efa nilaza ny hanolotra kandidà amin'ny fifidianana Filoham- pirenena ihany koa ny an-toko Psdum, tarihin'i Lahiniko Jean izay sady filohan'ny vondrona politika Udr-Fanovana. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Ankizilahikely (nitranga in-1) : Ankizilahikely efatra, mpiray tampo no narary ny zoma 18 janoary teo, tany Toliara, voamarina ho noho ny nihinanan'izy ireo ny karazana trondron-dranomasina antsoina hoe botana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
Ranomasimbe (nitranga in-1) : Nisy fotoana izy io niarahana tamin'ireo miaramila frantsay mitoby aty amin'ny faritry ny Ranomasimbe indianina », hoy ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny Tafika malagasy. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
fombafomba (nitranga in-1) : Tokony hamoraina ihany koa ireo fombafomba tokony arahina rehetra ahafahana misintona ireo mpampiasa vola vahiny. (Tsara hay)
tarihy (nitranga in-2) : Etsy ankilan'izay dia efa nilaza ny hanolotra kandidà amin'ny fifidianana Filoham- pirenena ihany koa ny an-toko Psdum, tarihin'i Lahiniko Jean izay sady filohan'ny vondrona politika Udr-Fanovana. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
Rabearisoa (nitranga in-2) : misokatra amin'ireo antoko politika sy ireo hery rehetra eto amin'ny firenena izay vonona ny hanohana azy amin'ny fifidianana ny antoko maitso »Hasin'i Mada-gasikara » tarihin'ny filohany, Saraha Georget Rabearisoa. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
Facebook (nitranga in-1) : Tsara rakotry ny media mahazatra ilay hetsika no sady hita be teny anaty fantsona media sosialy Facebook sy Twitter teo ambanin'ny tenifototra: #StateFuneral #LoveProtest ary #KenyaniKwetu (Fanamarihana: fiteny Swahili midika hoe “Antsika i Kenya”). (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Rita (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
mpilalao (nitranga in-1) : Fihetsika iray hanomezana risi-po an'ireo mpilalao taorian'ny fiverenan'izy ireo indray teo amin'ny dingan'ny famaranana ho an'ny Can izany. (Anjoron- »CAN »)
mahorey (nitranga in-1) : Somary vaovao amin'ny sofina na ny anarana hoe Diho, na ny mozika nentiny, izay fitrandrahana ihany koa ny mozika nentin-drazana mahorey. (IFM Analakely – Nanakoako ny mozika nentin-drazana mahorey sy kaomôrianina)
Rakotoarimanana (nitranga in-1) : “
minisiteran' (nitranga in-1) : Voararan'ny eo anivon'ny minisiteran'ny Jono tsy ho azo hohanina, noho izy mitondra poizina ity karazana trondro ity, manomboka ny volana novambra hatramin'ny volana avrily. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
efitrano (nitranga in-3) : na dia tsy nahafeno hipoka ny efitrano malalaky ny CCI Ivato aza, dia mbola nambabo ny fon'ny mpijery ny Malok”ila 13 Mey,naseho voalohany omaly tamin'ny efitrano maherin'ny 80 manerana ny Nosy. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
nanolorany (nitranga in-1) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Walya (nitranga in-1) : Tambazan'ny federasiona etiopianina ho an'ny baolina kitra 100 000 dolara isan'olona ny Antilopes Walya raha mahazo ny amboaran'i Afrika, izay hatao atsy Afrika Atsimo. (Anjoron- »CAN »)
Scoop (nitranga in-2) : Tamin'ny ankapobeny, dia nisy ny ezaka nataon'ny Scoop Digital tamin'ny fanatsarana ny lafiny teknika. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
Nakary (nitranga in-1) : Saribe ho an'ny #BallotRevolution: Nakarin'ilay mpampiasa Twitter @bonifacemwangi
nanilika (nitranga in-1) : Vao tsy ela izay no nanilika ny antoko Tambatra tsy ho mpikambana ao aminy ny mpitarika ny vondrona politika «Les as», Voninahitsy Jean Eugène. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Grad (nitranga in-1) : Ny antoko Grad Iloafo mpikambana eo anivon'ny vondrona politika Escopol dia efa nampiseho ny fano-hanany ny Filohan'ny an-toko Mts, Roland Ratsiraka. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Jimmy (nitranga in-1) : Nanara-dia azy mirahalahy tamin'io fampisehoana io i Jean Wellers (zava-maneno nentin-drazana kaomôrianina) sy Jimmy Rakotoson (Amponga maroanaka)
Gaston (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Voararan' (nitranga in-1) : Voararan'ny eo anivon'ny minisiteran'ny Jono tsy ho azo hohanina, noho izy mitondra poizina ity karazana trondro ity, manomboka ny volana novambra hatramin'ny volana avrily. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
Ambodinisotry (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Odilon (nitranga in-1) : Mahatonga aretina hafa tsy mampiteraka na mahafaty mihitsy io raha tsy voatsabo », hoy kosa ny Pr Raharinaivo Odilon. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
hatreo (nitranga in-1) : Na dia nitarika tamin'ny alalan'ny isa 2 no ho 0 aza izy ireo hatreo amin'ny minitra faha-50 dia tratran'ny RD Congo 2 no ho 2 ihany tany amin'ny fiafaran'ny lalao. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Fanjakàna (nitranga in-1) : ny 16 Janoary 2013, natao tao Nairobi renivohitra ny hetsi-panoherana am-pilaminana teo ambanin'ny teny faneva Fandevenana Fanjakàna #BallotRevolution. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
natokan' (nitranga in-1) : Fotoana efa voaomana mialoha natokan'ity fiangonana ity hitondrana am-bavaka sy hifampiarahabana amin'ny filohan'ny Fjkm sy ny asa rehetra eo anivon'izany fiangonana izany io notanterahina io. (Tapatapany)
Wanjiku (nitranga in-1) : me/ptBPN-6X avy amin'i @Tribe46thKenyan
nametrahan' (nitranga in-2) : Vao tamin'ny sabotsy teo anefa no niverina nanao fanazarantena ity farany, taorian'ny saika nametrahan'i Claude le Roy, mpanazatrany, fialana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Clio (nitranga in-1) : I Herizo Rakotozafy, izay nitondra Clio RS , no teo amin'ny laharana faharoa raha i Sitraka Rakotomalala (nitondra clio) no teo amin'ny fahatelo. (Sombiny)
Rakotozafy (nitranga in-2) : I Herizo Rakotozafy, izay nitondra Clio RS , no teo amin'ny laharana faharoa raha i Sitraka Rakotomalala (nitondra clio) no teo amin'ny fahatelo. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
nanotrona (nitranga in-1) : Minisitra am-polony sy Lehiben'ny faritra maro no tonga nanotrona ny fitokanana ireo fotodrafitrasa tany an-toerana. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
voarainy (nitranga in-1) : Fitarainana manodidina ny 12 isan'andro no nambaran'ireo mpiantsehatra samihafa fa voarainy mahakasika izany. (Zon’olombelona – Niroborobo ny herisetra an-tokantrano sy ny ady tany)
fampidinana (nitranga in-1) : Tokony harahin'ny fampidinana ny fandanian'ny Fanjakana sasan­tsasany anefa ny fanomezana io fanampiana io. (Tsara hay)
Arema (nitranga in-3) : Etsy ankilan'izay dia nilaza ny haka ny hevitry ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka mahakasika ny fisafidianana kandidà hiatrika io fifidianana io ireo mpikatroka Arema miara-dia amin'i Vaovao Benjamin. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Razanamparany (nitranga in-1) : “
Mercedes (nitranga in-1) : olona 6 no naratra vokatry ny fivadihana fiara mpitatitra olona iray marika « Mercedes sprinter » tany amin'iny lalam-pirenena faha-4 iny, teo amin'ny toerana an-tsoina hoe Manankazo ao amin'ny fokontanin'i Kiva, kaominina ambani- vohitr'Ankazobe, ny sabotsy 19 janoary teo tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany maraina. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
zoviana (nitranga in-1) : Mpanakanto efa tsy zoviana amin'ny fitrandrahana ny gadona nentin-drazana kaomôrianina i Maalesh ary nanolotra izany tamin'ity seho ity ho an'ny mpijery. (IFM Analakely – Nanakoako ny mozika nentin-drazana mahorey sy kaomôrianina)
filohana (nitranga in-1) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
Randrianja (nitranga in-1) : Isan'izany ny Anaf, Fizafato, Inner Weel…
nanazava (nitranga in-1) : Milina maty foana
Hihemotra (nitranga in-1) : Hihemotra 25% ny fahefa-mividy. (Tsara hay)
1986 (nitranga in-1) : Hatra- min'ny taona 1986 aho no nangataka ny tany ary efa intelo izay no nisy fitsirihana vita», hoy kosa Ravaorisoa Merline Josée, nitaraina. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
Antsahamanitra (nitranga in-1) : Nifamotoana teny Antsahamanitra avokoa ny mpino rehetra nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. (Tapatapany)
Manankazo (nitranga in-1) : olona 6 no naratra vokatry ny fivadihana fiara mpitatitra olona iray marika « Mercedes sprinter » tany amin'iny lalam-pirenena faha-4 iny, teo amin'ny toerana an-tsoina hoe Manankazo ao amin'ny fokontanin'i Kiva, kaominina ambani- vohitr'Ankazobe, ny sabotsy 19 janoary teo tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany maraina. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
Ramiandrisoa (nitranga in-1) : Tsy mampiteraka ary mety hahafaty mihitsy ny fadimbolana maharary maharitra ela loatra », hoy ny Dr Ramiandrisoa Koloina. (Toe-batan’ny vehivavy – Mety hahafaty sady tsy mampiteraka ny fadimbolana marary)
hamantarana (nitranga in-1) : Raisinay ho tompon'andraikitra tamin'ny nataony ireo mpitarika antsika ka amin'izany ny vatampaty dia ho endrika hamantarana ny fahafatesan'ny tsimatimanota & tsy fahaiza-mitantana. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
iharan' (nitranga in-1) : Ny 80%-n'ny vehivavy any ambanivohitra no nambaran'ireo tompon'andraikitra ireto fa tena mbola iharan'izany. (Zon’olombelona – Niroborobo ny herisetra an-tokantrano sy ny ady tany)
Kibaky (nitranga in-1) : Nolavin'ny Filoha Kibaki ny volavolan-dalàna momba ny Tonbontsoan'ireo Mpisotro Ronono nolanian'ny Antenimieram-Pirenena tamin'ny Alakamisy 10 Janoary 2013. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Rajao (nitranga in-1) : mbola nampiseho ny naha “role”azy Rajao izay voaporofo tamin'ny tehaka azony rehefa misy ny seho sy sehatra manaitra ao anatin'ny horonantsary. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
biraon' (nitranga in-2) : Taorian'i Nosy-Be sy Antalaha dia ireo mponin'i Vohilava ao Sainte-Marie indray no milaza ny hanao karazana fitokonana eo anoloan'ny biraon'ny Jirama ao Barachois anio manomboka amin'ny 10 ora maraina. (Fitifirana tany Sakaraha – Ahiana hihetsika indray ny havan’ ireo olona fito maty)
Challenger (nitranga in-1) : Lalao maromaro no natao teny an-toerana, ka mbola mitarika hatrany ny ekipan'ny Challenger. (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Maalesh (nitranga in-3) : samy nampiseho ny maha izy azy i Diho sy Maalesh tetsy amin'ny IFM
nananganana (nitranga in-1) : Voafidy ao amin'ny Filankevitra mpanara-maso, araka ny voalazan'ny andininy faha-18 ao amin'ny sata nananganana ny Camm ny olona dimy tsongoin'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fandraharahana, ka Andriatahiana Victoire no filohany izay Tonian'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana fandravana didy, Pr Razakanaivo Rita, Me Razafinarivo Chantal, Ramenason Gaston sy Me Andriamadison Hasina. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Fanazarantena (nitranga in-1) : Fanazarantena ataon'ny miaramila amin'ireo fitaovana mavesatra ireo no anton'izany, araka ny fantatra. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
hinanana (nitranga in-1) : Manafatrafatra hatrany ireo mpitsabo mba tsy hinanana afa-tsy ireo voankazo masaka mba hisorohana ireo karazan'aretina samihafa…. (Tapatapany)
kajikajy (nitranga in-1) : Io no miantoka fa tsy hiditra anaty kajikajy velively izany resaka fananam-pahaizana, fahefana na toetra izany. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
vatampaty (nitranga in-2) : Mihidy amin'ny fomba ofisialy ny Talata 15 Janoary ny Parlemanta ary ny andro manaraka an'io dia hanatitra vatampaty 221 izahay ho an'ireo mpikambana tsirairay miala ao amin'ny parlemanta. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
Ashton (nitranga in-1) : Notsindrian'ny mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, Cathérine Ashton, tao anatin'ny fanambaràna nivoaka ny sabotsy teo ny tokony hanohizana ireo ezaka rehetra amin'ny fampiharana ny sori-dalàna. (Sombiny)
Jean (nitranga in-6) : Toy izany ihany koa i Jean Christin Razafimanana (filohan'ny ligin'Atsinanana), Boto Marcel (filohan'Ihorombe) ary Jean de Capistran Rakotovaoarilala (filohan'i Matsiatra ambony). (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
nanazavan' (nitranga in-1) : Ny saran'ny fitaterana izay lafo kokoa no nanazavan'ny tobin-dasantsy ny anton'io fisondrotam-bidy io. (Tapatapany)
nisarahan' (nitranga in-1) : Ady sahala samy tsy nitoko toy izany ihany koa no nisarahan'i Maraoka sy Angola, lalao faharoa teo amin'ny vondrona A, teo amin'io andro voalohany io. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Tampoketsa (nitranga in-2) : Fiara mifono vy sy izay mety ho fitaovam-piadiana vaventy eo am-pelantanan'ny Tafika malagasy no ampiasaina any Tampoketsa, lalana mankany Mahajanga amin'izao fotoana izao. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
Naharaisana (nitranga in-1) : Naharaisana fitarainana efatra momba izany ohatra ny herinandro lasa teo. (Fiainam-pianakaviana – Miha kely taona ny zazavavy very manaraka lehilahy)
mora (nitranga in-1) : Rehefa mitovitovy tanjaka mantsy toa sarotra ihany ny hino hoe hisy hifandefitra mora foana izany. (Maka maro)
fanazarantena (nitranga in-9) : Vao tamin'ny sabotsy teo anefa no niverina nanao fanazarantena ity farany, taorian'ny saika nametrahan'i Claude le Roy, mpanazatrany, fialana. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
toetry (nitranga in-1) : « Miova ny toetry ny rotsak'orana amin'izao fotoana. (Toetr’andro – Miova ny toetry ny rotsak’orana eto amintsika)
Twitter (nitranga in-3) : Saribe ho an'ny #BallotRevolution: Nakarin'ilay mpampiasa Twitter @bonifacemwangi
Maraoka (nitranga in-1) : Ady sahala samy tsy nitoko toy izany ihany koa no nisarahan'i Maraoka sy Angola, lalao faharoa teo amin'ny vondrona A, teo amin'io andro voalohany io. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
Nandihizan' (nitranga in-1) : Nandihizan'ny «Boay kely» avokoa ireo mpanao politika diso fitetika. (Izay voa aza tezitra!)
nafoy (nitranga in-1) : Tsy nisy aina nafoy na olona naratra aloha tamin'ity loza ity », hoy hatrany ireo mpamonjy voina. (Tanjombato – Trano telo fitahirizan-damban’ny orinasa iray kilan’ny afo)
teknisianina (nitranga in-2) : Nanambara hatrany ny teknisianina fa tsy mbola misy aloha hatramin'izao ny rivo-doza ahiana hiditra. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
nahitan' (nitranga in-1) : Nionona tamin'ny taktika 4-4-3 tamin'io lalao io izy ireo, ka tsy nahitan'i Bafana irika. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
taktika (nitranga in-1) : Nionona tamin'ny taktika 4-4-3 tamin'io lalao io izy ireo, ka tsy nahitan'i Bafana irika. (Baolina kitra CAN 2013 – Notazonin’i Cap Vert sahala i Afrika Atsimo)
ambiansa (nitranga in-1) : “Saika tamin'ny kapila mangirana hatrany no nanarahako ny tantara, fa hay misy ambiansa hafa mihitsy rehefa mijery mivantana”, araka ny fanamarihan'i Michel R. (Sarimihetsika – Mbola nampiseho ny maha « rôla » azy Rajao ao amin’ny Malok’ila 13 Mey)
économistes (nitranga in-1) : ny fahitan'ireo mpahay hary ny toekarena amin'ity taona 2013 ity
Andriantsiferanarivo (nitranga in-1) : Ireo voka-dalao: sabotsy 19 janoary 08H: AT2B Andraisoro (80)# TMB2A Ambohimirary (43)(U16 Garcon) 09H30: ASSM Amparibe (59)# AT2B Andraisoro (43)(senior DAME) 11H: T T S Ambohimanarina (65)# CHALLENGER (72) (senior HOMME »A ») 13H00: B F T (36)# J C S A (71) (senior DAME) 14H00: DREAM TEAM # BEMIRAY Ambodinisotry (senior HOMME »A ») alahady 20 janoary 08H: ACA Ambohimanarina (62)# B F T (18)(U20 Fille) 09H30: AMBOHIPO (57)# CHALLENGER (31) (U16 Garcon) 11H: CHALLENGER (51) # J S B Andraisoro.... (« Fety de basikety » Andraisoro – Mitarika ny « Challenger »)
Hikatroka (nitranga in-1) : Hikatroka amin'ny klioban'ny FCT, na Foot ball club Tsarahonenana izy amin'ny alahady 27 janoary izao,ao amin'ny kianja Manampisoa, ao Masindray. (Sombiny)
Tato (nitranga in-1) : Tato anatin'ny andro vitsy izay dia nahenoam-peo mafy mirefodrefotra ny faritra sasany manodidina ny renivohitra amin'ny alina. (Fanazarantenan’ny Tafika – Nirefodrefotra ny tifitra tamin’ny fiara mifono vy)
nampiseho (nitranga in-3) : Ny antoko Grad Iloafo mpikambana eo anivon'ny vondrona politika Escopol dia efa nampiseho ny fano-hanany ny Filohan'ny an-toko Mts, Roland Ratsiraka. (IFM Analakely – Nanakoako ny mozika nentin-drazana mahorey sy kaomôrianina)
noraisy (nitranga in-1) : Ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Filohan'ny tete-zamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny tsy hiro-tsaka hofidina no ahiana hiteraka izay fizarazaran-kevitra izay. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
Cross (nitranga in-1) : “
Zoron' (nitranga in-1) : Nanao ity antso famoriana ity tao amin'ny Twitter i @KenyaNiKwetu :
noentiny (nitranga in-1) : Ity farany izay nindrana ny hiran'ny tarika Mahaleo «hiaraka isika» noentiny nanehoana izay fahavononany ny handeha lavitra amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena izay, io omaly io. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
Taolagnaro (nitranga in-1) : Vehivavy isan'ny tia zaridaina i Atallah Béatrice
voalazany (nitranga in-1) : Vehivavy isan'ny tia zaridaina i Atallah Béatrice
nandrahona (nitranga in-1) : Rehefa azon'izy ireo ilay vola dia lasa izy ireo nandositra sady nandrahona tamin'ny basy izay olona mitady hanaraka azy », hoy hatrany ny zandary avy any an-toerana. (Asan-jiolahy – Mpamboly very Ar 1 400 000 ary voatoto vodibasy)
Monica (nitranga in-1) : Monica Rasoloarison/Francis Ramanantsoa. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
rainy (nitranga in-2) : Vavimatoan'ny fianakaviana rahateo ny tenany izay isan'ireo akaiky ny rainy indrindra amin'ireo iray tampo aminy. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Norovololoniaina (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'io lisitra io ihany koa i Lala Norovololoniaina Rasoanomenjanahary sy Onja Ravakiniaina Ranaivoarison, izay filoha sy sekretera jeneralin'ny seksionan'Antananarivo renivohitra. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
nataon' (nitranga in-6) : Lalao tsy dia nampoizin'ny rehetra loatra satria na dia vao sambany tamin'ity taona ity aza ireto Antsantsa mangan'i Cap Vert ireto vao tafita amin'ny dingan'ny famaranana dia azo heverina fa nahita fahombiazana teo amin'ny lalao voalohany nataon'izy ireo. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
tongava (nitranga in-1) : Nanao ity antso famoriana ity tao amin'ny Twitter i @KenyaNiKwetu :
Barachois (nitranga in-1) : Taorian'i Nosy-Be sy Antalaha dia ireo mponin'i Vohilava ao Sainte-Marie indray no milaza ny hanao karazana fitokonana eo anoloan'ny biraon'ny Jirama ao Barachois anio manomboka amin'ny 10 ora maraina. (Olan’ny herinaratra – Hitokona noho ny delestazy ihany koa ny mponin’i Sainte Marie)
notazomiko (nitranga in-1) : Talohan'ny nikipin'ny masony dia nanafatrafatra ahy ny hiahy ireo iraitampo amiko ny raiko ary notazomiko sy notanterahako izany hafatra izany», hoy i Béatrice Atallah. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Kash (nitranga in-1) : “
nitaiza (nitranga in-1) : «Izy no nampianatra sy nitaiza ahy hiatrika ny fiainana sy ho tia ny manodidina ahy. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Portos (nitranga in-1) : Isan'ireo mandrafitra izany ary hitana ny toeran'ny sekretera jeneraly i Maeva Portos Houssen, filohan'ny ligin'i Boeny teo aloha. (Fifidianana/Atletisma – Hanohitra ny ekipan-dRazafimahefa ireo filohana ligy teo aloha)
kandidan' (nitranga in-1) : «Izy ihany no tompon'ny teny farany amin'ny fisafidianana izay kandidan'ny Arema ka miandry izany izahay», hoy ny fanazavan'
Louisette (nitranga in-1) : Tamin'ny 9 ora sy sasany no voalaza fa nanomboka nandoa izy ireo ary tonga nanatona ny hopitaly tamin'ny 11ora sy sasany », hoy ny Dr Soanirina Louisette, tompon'andraikitra momba ny fanaraha-maso ny sakafo any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. (Fahapoizinana ara-tsakafo – Ankizy efatra narary nihinana trondron-dranomasina « botana »)
nomarihany (nitranga in-3) : Isan'ny tena zava-dehibe amiko ny mijery sy manampy ny fianakaviako», araka ny nomarihany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Béatrice (nitranga in-7) : vehivavy tso-piaina, tia manasoa olona ary tia mandray andraikitra eo amin'ny fianam-pianakaviana i Atallah Béatrice, filohan'ny Vvaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Cenit). (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Lagara (nitranga in-2) : isa 15 no ho 13 no nandavoan'Ankadifotsy ny ekipan'ny Lagara
hampahalala (nitranga in-1) : hampahalala ny momba azy ny Foibem- pitsarana sy mpanelanelanana eto Madagasikara na Camm amin'ny 22 janoary izao. (Fandraharahana – Tafatsangana ny filankevi-pitondran’ny Camm)
Nandika (nitranga in-1) : Mpanoratra Collins Mbalo · Nandika avylavitra
keniana (nitranga in-1) : Ilay fizorana tsy misy herisetra, ampilaminana dia ho avy ao amin'ny Kianja Uhuru mankany amin'ny parlemanta, miaraka aminà saina keniana an'arivony manohitra ireo ‘vautours' no sady milanja vatam-paty. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
hitantana (nitranga in-2) : taorian'ny nametrahan'i Christian Razafimahefa fialana tsy hitantana ny federasiona malagasin'ny atletisma, ka nanolorany izay kandidà hotohanany dia nivondrona hanohitra azy avokoa ireo filohana ligy dimy ka nitambatra amina lisitra iray hilatsaka hofidiana. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Anosy (nitranga in-2) : Hita ihany avy eo ireo ankizy, izay milaza avokoa fa nitsoaka ny tokantranon-dray aman-dreniny, ka nonina tany amin'ny sakaizany », hoy ny fanamafisan'ny kaomisera Ramilijohn Hanitra, eo anivon'ny Pmpm eny Anosy. (Fifidianana – Miandrandra fanohanana avy amin’ireo antoko hafa ny Maitso)
Ravaorisoa (nitranga in-1) : Hatra- min'ny taona 1986 aho no nangataka ny tany ary efa intelo izay no nisy fitsirihana vita», hoy kosa Ravaorisoa Merline Josée, nitaraina. (Fokontany Ambatomaro – Mpitandro ny filaminana mibodo tanin’olona)
hanjary (nitranga in-1) : @geekmsanii mibitsika hoe :
Mety tsy hanjary noho ny antony iray fotsiny ny #BallotRevolution. (Hetsi-panoherana Ny Sarintsarim-pandevenana Ny Fanjakàna Ao Kenya #BallotRevolution)
kandidany (nitranga in-1) : Ireo antoko politika eo anivon'ny hery politika mitambatra (Hpm) indray dia samy hanohana ireo kandidany. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
herijika (nitranga in-1) : Heverina tsy ho vitsy ireo hanao »tsato-piso » sy hisafidy endrika amam-bika any ambanivohitra any, ka na izay tsy hanao fampielezan-kevitra firy aza mety mba hanana herijika. (Maka maro)
ahiana (nitranga in-2) : Nanambara hatrany ny teknisianina fa tsy mbola misy aloha hatramin'izao ny rivo-doza ahiana hiditra. (Mety hampipatitaka ireo vondrona politika ny fisafidianana kandidà)
nivadibadika (nitranga in-1) : « Nilaozan'ny hisatra ilay fiara tamin'ny fidirany tao anaty fiolahana ka nivadibadika ary izany no nandratra ireo olona enina ireo », hoy ny tatitra avy amin' ny zandarimaria any an-toerana. (Ankazobe – Olona enina naratra vokatry ny fivadihana taksiborosy)
2002 (nitranga in-1) : Ny taona 2002 ka hatramin'ny taona 2009 dia efa niasa tao anatin'ny filankevim-pirerenena misahana ny raharaham-pifidianana ny tenany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
Andranoambo (nitranga in-1) : Teny amin'ny fokontany Andranoambo Andohatapenaka no nanaovana izany mba hanentanana ny olona hanadio. (Tapatapany)
teto (nitranga in-3) : Tsy vitan'izay fa mbola niharihary ihany koa ny fanagiazana ny sehatry ny fandraharahana teto amin'ity firenena ity, ka nivadika ho an'ny tombontsoany manokana. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
nihaona (nitranga in-1) : tsay nampoizina i Cap Vert raha nihaona tamin'ny Bafana Bafana
2009 (nitranga in-1) : Ny taona 2002 ka hatramin'ny taona 2009 dia efa niasa tao anatin'ny filankevim-pirerenena misahana ny raharaham-pifidianana ny tenany. (Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice)
hamonjy (nitranga in-1) : « Misy ireo hiala ao an-trano, ndeha hamonjy sekoly dia tsy hita, tsy miverina ao an-trano raha tsy roa andro aty aoriana. (Fiainam-pianakaviana – Miha kely taona ny zazavavy very manaraka lehilahy)
fambaboana (nitranga in-1) : Fanehoana tanjaka mifanindran-dalana amina fambaboana fo ihany koa ny fitokanana ireo fotodrafitrasa maro tany an-drenivohitr'i Betsimisaraka. (Fifidianana filoham-pirenena – Nanamafy ny firotsahany amin’ny taona 2018 Rajoelina)
réflexion (nitranga in-1) : ny fahitan'ireo mpahay hary ny toekarena amin'ity taona 2013 ity
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/21_Janoary_2013&oldid=9614665"
Voaova farany tamin'ny 21 Janoary 2013 amin'ny 21:32 ity pejy ity.